बहसको प्रकाशमा ओथिप्रोन दुविधामा एक नजर (स्तम्भ 457) - रब्बी माइकल अब्राहम
रब्बी माइकल अब्राहम
एक व्याख्यान बुक गर्नुहोस्
जवाफ - Halacha
प्रतिक्रिया - Meta Halacha
प्रतिक्रिया - विश्वास
प्रतिक्रिया - टोरा र विज्ञान
प्रतिक्रिया - ताल्मुडिक अध्ययन
प्रतिक्रिया - दर्शन
प्रतिक्रिया - सामान्य
फोरमबाट पोस्टहरू "यहाँ सोच्न बन्द गर्नुहोस्"
शिउरिम शासको ट्र्याक्टमा लेखिएको थियो
विश्वासको मामिलामा नोटबुकहरू
iGod भिडियोहरूको सन्दर्भ
बहसको प्रकाशमा ओथिप्रोन दुविधामा एक नजर (स्तम्भ 457)
80 टिप्पणी	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
अघिल्लो स्तम्भमा मैले म र डेभिड एनोक बीचको तर्क प्रस्तुत गरेको थिएँ (हेर्नुहोस् यहाँ रेकर्डिङ) नैतिकता को वैधता को लागी एक आधार को रूप मा भगवान को आवश्यकता छ कि प्रश्न मा (वा: भगवान बिना सबै कुरा अनुमति छ)। छलफलको क्रममा, मध्यस्थ (जेरेमी फोगेल) ले ओथिप्रोनको दुविधा उठाए, जसको अनुहारमा यो छलफलसँग सम्बन्धित छैन। केही समयपछि मलाई एउटा गोरुको याद आयो 278 मैले नैतिकता (ईश्वरमा नैतिकताको झुण्ड) बाट प्रमाणको लागि दुविधा र यसको प्रभावहरूको सामना गरिसकेको छु। माथिको छलफलमा मैले प्रश्नको छोटकरीमा जवाफ दिएको छु, र एनोकसँगको बहससँग यसको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न र त्यहाँ र अघिल्लो स्तम्भमा मैले गरेको भिन्नतालाई तिखार्नको लागि म यहाँ यस मुद्दामा फर्कनेछु।
मैले यस स्तम्भसँग व्यवहार गर्ने ईश्वरको अवधारणा अघिल्लो स्तम्भमा मैले व्यवहार गरेको "दुबला" ईश्वर जस्तै होइन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावना गर्नु मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। मैले यहाँ दिएको केही सुझावहरू नैतिकताका नियमहरूलाई प्रभाव पार्न आवश्यक रहेको "दुबला" ईश्वरको अंश होइन। म स्तम्भको अन्त्यमा यस बिन्दुमा फर्कनेछु।
प्लेटोनिक संवादमा A. Eitifron निम्न प्रश्न खडा गरिएको छ: के राम्रो राम्रो छ किनभने देवताहरूले यो चाहन्छन्, वा देवताहरूले राम्रो चाहन्छन् किनभने यो राम्रो छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रश्न यो हो कि राम्रोको वस्तुगत अर्थ छ, वा के राम्रो बनाउँछ त्यो देवताहरूको निर्णय हो, तर उही हदसम्म उनीहरूले निर्णय गर्न सक्छन् कि अन्य कुनै व्यवहार राम्रो वा खराब हो। सबै कुरा तिनीहरूको मनमानी इच्छामा समर्पित छ। पक्कै पनि यस्तै प्रश्न Gd, र Avi Sagi र ड्यानियल Statman, तिनीहरूको पुस्तकको सम्बन्धमा उठाउन सकिन्छ। धर्म र नैतिकता, मुद्दाको धेरै विस्तृत छलफल होल्ड गर्नुहोस्। तिनीहरूको निष्कर्ष त्यहाँ छ कि लगभग सबै यहूदी विचारकहरूले पछिल्लो विकल्पको वकालत गर्छन्। म माथिको पुस्तकमा सामान्य रूपमा उत्पन्न हुने सबै सूक्ष्मता र तर्कहरूमा जाने छैन (मलाई लाग्छ कि यसमा केही अशुद्धताहरू छन्), र म दुवै पक्षको आधारभूत तर्कको संक्षिप्त सिंहावलोकनमा आफैलाई सीमित गर्नेछु।
एकातिर, ईश्वरशास्त्रीय रूपमा हामी भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र कुनै पनि कुराको अधीनमा हुनुहुन्न भन्ने मान्छौं। उहाँ बाहेक कोही छैन। उहाँले संसार सृष्टि गर्नुभयो र यसमा प्रचलित कानूनहरू स्थापना गर्नुभयो। तात्पर्य यो हो कि उसले कल्पना गरेको कुनै पनि अन्य तरिकाले तिनीहरूलाई निर्धारण गर्न सक्थे। त्यसैले राम्रो र खराबको कुनै वस्तुगत अर्थ छैन। अर्कोतर्फ, यदि कसैले यो दृष्टिकोण अपनाउछ भने, निष्कर्ष यो छ कि भगवान असल हुनुहुन्छ भन्न असम्भव छ। भगवान असल हुनुहुन्छ भनी कथनले मानिन्छ कि त्यहाँ एक राम्रो छ जुन उहाँलाई परवाह नगरी परिभाषित गरिएको छ, र तर्क यो हो कि उहाँको व्यवहार र आवश्यकताहरू र असलको लागि समान उद्देश्य मापदण्ड बीच एक फिट छ। तर यदि यो उसको निर्णय हो जसले राम्रोको अवधारणालाई परिभाषित गर्दछ, तब भगवान असल हुनुहुन्छ भनी कथन एक tautological परिभाषा (वा विश्लेषणात्मक प्रमेय) र तर्क होइन। मूलतः यसको अर्थ हुन्छ: परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। तर यो हामी सबैको लागि सत्य हो।
धेरै धर्मशास्त्रीहरू (र सानो स्वार्थी पनि उनीहरूसँग सामेल हुन्छन्) यो समस्याग्रस्त स्थिति हो भन्ने सोच्छन्। भगवान साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ र अन्यथा हुन सक्दैन। यसले पक्कै पनि राम्रोलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गरेको छ र परमेश्वर आफैंमा यो परिभाषाको अधीनमा हुनुहुन्छ भनेर मानिन्छ। उसले पक्कै पनि हामीलाई भ्रममा पार्न सक्छ र असल र खराबको बीचमा भेद नगर्न हाम्रो आँखा अन्धो बनाउन सक्छ, तर उसले अन्यथा राम्रो र खराबको निर्धारण गर्न सक्दैन। मैले उल्लेख गरेझैं, धर्मशास्त्रीय कठिनाइहरूको बावजुद, यस्तो देखिन्छ कि यहूदी विचारका अधिकांश चिन्तकहरूले दोस्रो दृष्टिकोण राख्छन्।
बुझ्ने र सिकाउने
पहिलो अवधारणालाई अलिकति परिष्कृत गर्न सकिन्छ, र निम्नानुसार तयार गर्न सकिन्छ: हामीसँग राम्रो र खराबको बारेमा अन्तर्ज्ञान छ। तर्क यो हो कि ईश्वरको इच्छा एउटै अन्तर्ज्ञान अनुरूप छ। तर यो अन्तर्ज्ञान उहाँद्वारा हामीमा रोपिएको छ, त्यसैले त्यहाँ वास्तवमा राम्रो र खराबको कुनै वस्तुनिष्ठ अवधारणा छैन। यसरी यो भन्न सकिन्छ कि यो कथन साँच्चै दावी हो (र परिभाषा होइन), तर एकै समयमा यो एक दावी हो जुन हाम्रो अवधारणाहरु संग व्यवहार गर्दछ र संसार को लागी होइन। संसार आफैंको लागि, कथन "परमेश्वर असल हुनुहुन्छ" को अर्थ केहि छैन (यो एक खाली पहिचान हो, एक ट्याटोलोजी हो)।
यो अर्थ र शिक्षण बीचको सम्बन्धको समस्याको विशेष मामला हो। विश्लेषणात्मक दार्शनिकहरूले अक्सर प्रयोग गर्ने उदाहरण लिँदै (जस्तै। यहाँदावी: बिहानको तारा साँझको तारा हो। यो केहि समय को लागी दुई फरक तारा (एउटा साँझ र अर्को बिहान) को रूप मा मानिएको छ, तर अन्त मा यो एउटै तारा हो भनेर हामीलाई स्पष्ट भयो। अब हामीलाई सोधिएको छ: के यो दाबी खाली दाबी वा परिभाषा (विश्लेषणात्मक प्रमेय) हो? के यसमा कुनै सामग्री छ वा यो खाली ट्याटोलोजी हो? स्पष्ट रूपमा यस्तो वाक्यले केहि पनि बोल्दैन, किनकि यो एक चीज र आफै बीचको पहिचान हो। तर हाम्रो बुझाइ यो वाक्यमा केही नवीनता छ। यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नै अवधारणाहरूको बारेमा केही सिकाउँछ। हामीले सोचेका दुई ताराहरू एउटै तारा हुन्। यस वाक्यले संसारको हाम्रो ज्ञानलाई परिवर्तन गर्छ, यद्यपि यसको वस्तुगत सामग्रीको हिसाबले यो खाली पहिचान जस्तो देखिन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि यो प्रकारको कुनै पनि पहिचान दावीको मामला हो:aहो b। यो दाबी सहि हो भनी मान्दै, त्यसोभए यसको वास्तवमा अर्थ हुन्छ:aहो, अर्थात् खाली ट्याटोलोजी। पहिचान दावीहरूको अर्थको समस्याको विश्लेषणात्मक समाधान भनेको अर्थ र शिक्षण बीचको भिन्नता हो। विश्लेषणात्मक दार्शनिकहरू (फ्रेगे पछि) भन्छन् कि यस्तो पहिचान अनुसार त्यहाँ अर्थ छ तर निर्देशन (वा रंग) होइन। यसको एक अर्थ छ जुन हाम्रो लागि न त खाली छ न त मामूली छ, तर यदि तपाईले संसारमा के संकेत गर्दछ भने, यो एक तुच्छ पहिचान दावी हो।
हामी अब ओथिप्रोन दुविधामा फर्कन सक्छौं। भगवानले राम्रो र नराम्रो परिभाषित गरिरहनु भएको छ, यो तर्क गर्न सकिन्छ कि उहाँ असल हुनुहुन्छ भनाइको अर्थ छ तर निर्देशन होइन। यसको शिक्षा (रङ) को हिसाबले यो खाली छ किनभने यो राम्रो को परिभाषा द्वारा राम्रो छ। उसले गर्ने सबै कुराले उसलाई राम्रोको परिभाषा अन्तर्गत छोड्छ, त्यसैले अमिरा जो राम्रो छ सामग्री (विश्लेषणात्मक) खाली छ।
तर मलाई यो हल्का शब्दहरू पनि स्वीकार गर्न गाह्रो छ। साधारण भावना यो हो कि भगवान साँच्चै असल हुनु पर्छ, यसको मतलब उहाँ असल हुनुहुन्छ भन्ने दाबी खाली परिभाषा होइन तर दाबी हो। यदि यो मामला नभएको भए, त्यहाँ परमेश्वरको भलाइमा संलग्न हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन, र त्यहाँ हामीलाई अनैतिक लाग्ने अभ्यासहरू (जस्तै इसहाकको बन्धन, अमालेकको विनाश, र योद्धाहरू) बाट यसको बारेमा कुनै प्रश्नहरू हुनेछैनन्। जस्तै)। यो बुझ्नुपर्छ कि यदि भगवानले चाहेको कुरालाई राम्रो भनेर परिभाषित गरिएको छ भने त्यसमा नैतिक शंकाको कुनै ठाउँ छैन। उसले इसहाकलाई पछ्याउन आदेश दियो र त्यसैले इसहाकको बन्धन राम्रो कुरा हो। यहाँ ईश्वरीय आज्ञा र नैतिकताको बीचमा असन्तुष्टि रहेको अनुभूतिले हाम्रो सुरुवात बिन्दुलाई ईश्वर असल छ भनेर संकेत गर्दछ। जसरी नैतिक बहसको अस्तित्वले नैतिकताको वस्तुनिष्ठतालाई सङ्केत गर्छ (अन्यथा त्यहाँ बहस गर्नुपर्ने केही थिएन) र नैतिक आलोचनाको अस्तित्वले नैतिक तथ्यहरूको वस्तुनिष्ठतालाई जनाउँछ (अन्यथा त्यहाँ अनैतिक मनोवृत्तिको आलोचनाको लागि कुनै ठाउँ छैन। व्यवहार)।
निष्कर्ष यो हो कि साधारण धार्मिक अन्तर्ज्ञानले हामीलाई Othipron दुविधाको अर्को पक्षको रूपमा सिकाउँछ कि राम्रोलाई वस्तुनिष्ठ र बलपूर्वक परमेश्वरले पनि परिभाषित गरेको छ। त्यो हो, परमेश्वरले चीजहरू चाहनुहुन्छ किनभने तिनीहरू असल छन् र अर्को तरिका होइन। केवल यस तरिकाले यो राम्रो छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ, र दुर्व्यवहारको उदाहरणहरूको लागि यसको आलोचना (वा व्याख्या खोज्नुहोस्)। तर हामीले देख्यौं कि यो दृष्टिकोणले उल्टो कठिनाई बढाउँछ, र म अब यसलाई सम्बोधन गर्न जान्छु।
भौतिकशास्त्रको नियम र तर्कको "कानूनहरू" बीच
यो दृष्टिकोणले विपरीत धर्मशास्त्रीय कठिनाई बढाउँछ। यो कसरी सम्भव छ कि सबै थोक सृष्टि गर्नुहुने र सबै कुरा आफ्नो शक्तिले बनाउनुहुने परमेश्वर अझै पनि उहाँले नबनाएको बाह्य नियमहरूको अधीनमा हुनुहुन्छ? यो बुझ्नको लागि, हामीले विगतमा यहाँ दुई प्रकारका कानूनहरू बीचको भिन्नतामा फर्कनुपर्छ (उदाहरणका लागि स्तम्भ हेर्नुहोस्। 278)। भगवान, निस्सन्देह, भौतिक विज्ञान को नियमहरु को अधीनमा छैन, को लागी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्यो, र निषेध गर्ने मुख हो जसले अनुमति दिएको मुख हो। ऊ अवश्य पनि राज्यको कानूनको अधीनमा छैन (यदि मात्र किनभने उनी यसको नागरिक होइनन्)। तर अर्कोतर्फ यो निश्चित रूपमा तर्क को नियम को "विषय" छ। तर्कको नियमहरू परमेश्वरमा "जबरदस्त" छन्। उसले गोल त्रिकोण बनाउन वा तर्कबाट विचलित गर्न सक्दैन, केवल किनभने त्यहाँ गोल त्रिकोण जस्तो कुनै चीज छैन र त्यस्तो कुनै प्राणी तर्कबाट विचलित हुँदैन। परिभाषा अनुसार त्रिकोण गोल होइन। यो आवश्यकताबाट बाहिर त्रिकोणमा लगाइएको कुनै कानूनको कारणले होइन, तर यसको स्वभावले हो। त्रिकोणको रूपमा यसको परिभाषा अनुसार यो गोलाकार छैन र गोल हुन सक्दैन। त्यसकारण गोल त्रिकोण बनाउन असक्षमता Gd मा लगाइएको बाह्य अवरोधको कारण होइन, र त्यसैले यो यसको सबै क्षमतामा सीमितता, वा यसमा एक हानि पनि होइन।
एक सर्वशक्तिमान प्राणी कल्पनामा पनि सबै कुरा गर्न सक्षम छ। तर एक गोल त्रिकोण एक खाली अवधारणा हो। त्यहाँ त्यस्तो केही छैन र यो अकल्पनीय छ। त्यसकारण यस्तो चीज सिर्जना गर्न परमेश्वरको असक्षमता उहाँको क्षमतामा कुनै हानि होइन। कल्पना गर्नुहोस् कि कसैले तपाईंलाई परमेश्वरले गोल त्रिकोण बनाउन सक्नुहुन्छ कि भनेर सोधेको छ। म उहाँलाई यो अवधारणा पहिले मलाई व्याख्या गर्न सोध्छु र त्यसपछि म यसको जवाफ दिन सक्छु। पक्कै पनि उसले यसलाई व्याख्या गर्न सक्षम हुनेछैन (यसको तीखो कोणहरू छन् वा छैनन्? यसको कोणहरूको योग के हो? के यसका सबै बिन्दुहरू त्यस बिन्दुबाट समान दूरीमा छन्?), त्यसैले प्रश्न आफैंमा स्पष्ट छ।
मैले त्यहाँ व्याख्या गरेझैं, भ्रमको मूल कुरा भनेको "कानून" शब्द हो, जुन यी दुई सन्दर्भहरूमा फरक अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। भौतिकशास्त्रका नियमहरू सृष्टिको प्रकृतिमा ईश्वरले लागू गरेका नियमहरू हुन्। यो विधान संसारको लागि एक विशेष प्रकृति सिर्जना गर्ने उनको निर्णय हो जुन उसले विभिन्न सम्भावनाहरूबाट सिर्जना गरेको हो। उहाँले प्रकृतिका अन्य नियमहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। यसको विपरित, तर्कका नियमहरू समान अर्थमा कानून होइनन्। तार्किक सन्दर्भमा "कानून" शब्दको प्रयोग उधारो हो। यो केवल चीजहरूको परिभाषा हो र बाहिरी चीज होइन जुन तिनीहरूलाई बाध्य पारिन्छ। त्रिभुज गोलाकार होइन, न त कसैले निषेध गरेको कारणले न त यो निषेध गरिएकोले । त्रिभुज भएको कारण यो गोलाकार होइन। त्यसैले यहाँ भन्नु सही होइन कि भगवानले धेरै सम्भावित प्रणालीहरू मध्ये एउटा तार्किक प्रणाली रोज्नुभयो। अर्को कुनै तार्किक प्रणाली छैन। अबदेखि तर्कको नियमसँग मिल्दोजुल्दो सन्दर्भमा म उद्धरण चिन्हहरूमा "कानून" शब्द प्रयोग गर्नेछु।
नैतिकता को नियम को स्थिति
अब उठ्ने प्रश्न नैतिकताका नियमहरूको स्थिति हो: के यी नियमहरू भौतिकशास्त्रका नियमहरूको अर्थमा छन्, वा तिनीहरू तर्कका "कानूनहरू" को अर्थमा "कानूनहरू" हुन्? ओथिप्रोन दुविधाको पहिलो पक्षको वकालत गर्नेहरूले नैतिकताका नियमहरू भौतिकशास्त्रका नियमहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन् भनी विश्वास गर्छन्, र त्यसैले तिनीहरूलाई निर्धारण गर्ने र परिभाषित गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। दुविधाको अर्को पक्ष, अर्कोतर्फ, मानिन्छ कि नैतिकताको "कानूनहरू" तर्कको "कानूनहरू" जस्तै छन् (यी "कानूनहरू" हुन् र कानून होइनन्), र त्यसैले परमेश्वरमा बाध्य छन्। उहाँले नैतिक कानूनको भिन्न प्रणाली बनाउन सक्नुभएन। उदाहरणका लागि, उसले एउटा संसार सिर्जना गर्न सक्दैन जहाँ अर्को नैतिकता प्रबल हुनेछ (मानिसहरूलाई हत्या वा यातना दिने सकारात्मक कार्यहरू हुनेछ)। परिभाषा अनुसार नैतिकताले हत्या निषेध गर्दछ।
उसले पक्कै पनि त्यस्तो संसार सिर्जना गर्न सक्छ जहाँ मानिसहरूले यातनाको आनन्द लिनेछन् (के यस्तो संसारमा उनीहरूलाई "यातना" भन्नु उचित हुन्छ?), र त्यसपछि त्यहाँ दुःख निम्त्याउनमा नैतिक समस्या नहुन सक्छ। तर जहाँ दुःख निम्त्याउनु दुर्भाग्य होइन। कुनै पनि सम्भावित संसारमा मानिसहरूलाई चित्रण गर्नु नराम्रो कुरा हो। यो एक वास्तविक भिन्न संसारको बारेमा हो, अर्थात् यस्तो संसार जहाँ दुःखले दुःख दिँदैन। एक यस्तो संसारको बारेमा पनि सोच्न सक्छ जहाँ मानिसहरूलाई चिढ्याउनु राम्रो हो भनेर परिभाषित गरिएको छ, तर यो फरक नैतिकता भएको संसार होइन तर यस्तो संसार हो जहाँ मानिसहरू नैतिकताका नियमहरूमा अन्धा छन् (र यसलाई सिर्जना गर्ने ईश्वर पनि नैतिक छैनन्। )। तपाईं संसारको प्रकृतिमा कुनै पनि प्यारामिटर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र एक फरक संसार सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ यो फरक हुनेछ। तर त्यस विशेष संसारको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, नैतिकताका नियमहरू तिनीहरूबाट स्पष्ट रूपमा व्युत्पन्न हुन्छन् (तिनीहरू हामीमाथि बाध्य छन्)। रामचालको प्रचलित भनाइ, "असल काम गर्ने राम्रो स्वभाव" भन्ने कुराको आधार यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। Gd स्वभावले राम्रो गर्नु पर्छ। उहाँसँग अर्को विकल्प छैन (यो उहाँमाथि बाध्य छ)।
यसको मतलब यो हो कि "हत्या खराब छ" भनाइ विश्लेषणात्मक छ, विरोधाभासको कानून जस्तै। जबकि यो एक नैतिक तथ्य हो, यो आकस्मिक छैन (तर आवश्यक)। त्यसकारण परमेश्वरमा यो जबरजस्ती (वा बरु: "बर्जित") हो भनी दाबी गर्न कुनै बाधा छैन, जसरी तर्क उहाँमा "बलियो" छ। यो उदाहरण को लागी प्रकृति को नियमहरु भन्दा फरक छ। उदाहरणका रूपमा गुरुत्वाकर्षणको नियमको दाबीलाई लिनुहोस्: द्रव्यमान भएका कुनै पनि दुई वस्तुहरूले द्रव्यमानको गुणनफलसँग समानुपातिक र तिनीहरूबीचको दूरीको वर्गको विपरीत समानुपातिक बलद्वारा एकअर्कालाई आकर्षित गर्छन्। यो एक विश्लेषणात्मक दावी होइन, र यो गलत हुन सक्छ। त्यहाँ एउटा संसार हुन सक्छ जहाँ गुरुत्वाकर्षणको नियम फरक हुनेछ (जस्तै, तेस्रोमा दूरीको समानुपातिक बल)। यस्तो व्यवस्था परमेश्वरलाई समर्पित छ, र केवल उहाँको आफ्नै निर्णयले यसको सामग्री निर्धारण गरेको छ।
यो अघिल्लो स्तम्भसँग कसरी मिल्छ
अघिल्लो स्तम्भमा मैले तर्क गरें कि भगवान बिना कुनै वैध नैतिकता हुन सक्दैन। के यसले यहाँ मेरो दावीको विरोध गर्दैन कि नैतिकता परमेश्वर र उहाँको अगाडि बाध्य छ, र त्यसैले उहाँको इच्छाको उत्पादन पनि होइन? स्पष्ट रूपमा यहाँ अगाडिको विरोधाभास छ। अब मैले बुझें कि यो सम्भवतः जेरेमी फोगेल, सहजकर्ताको मतलब थियो, जसले हाम्रो छलफलमा ओथिप्रोन दुविधा उठाए र मलाई यसको बारेमा मेरो राय सोधे।
छलफलमा नै मैले राम्रो र नराम्रोको परिभाषा र तिनीहरूप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई छुट्याएको छु भनी संक्षिप्त व्याख्या गरें। राम्रो र खराब को परिभाषा भगवान मा बाध्य छ र अन्यथा हुन सक्दैन। हत्या राम्रो हो वा अरूलाई सहयोग गर्नु नराम्रो हो भनेर उसले पनि निर्धारण गर्न सक्दैन। तर असल गर्ने र नराम्रोबाट बच्ने प्रतिबद्धता भगवान बिना अवस्थित छैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हत्या निषेधित छ भन्ने सामान्य दावी, अर्थात् हत्या निषेधको नैतिक तथ्यको लागि बाध्यकारी वैधता छ, परमेश्वरमा जबरजस्ती गरिएको छैन। यो उहाँको आज्ञाबाट लिइएको हो र उहाँद्वारा बनाइएको हो।
'नैतिक तथ्य' को अवधारणामा फर्केर, हामी यसलाई यसरी राख्न सक्छौं: तिनीहरू आफैंमा अवस्थित हुन सक्छन्, डेभिड इनोकले दाबी गरे जस्तै (अर्थात् परमेश्वरले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन), तर मैले उहाँको विरुद्धमा तर्क गरे तापनि तिनीहरू अवस्थित छन् र केहीमा राखिएका छन्। विचारहरूको संसारको कुनामा (छ), यो अझै पनि मलाई बाध्यकारी नहुन सक्छ (अवश्य)। म उल्लेख गर्नेछु कि अघिल्लो स्तम्भमा मैले नैतिक तथ्यहरू कसले सिर्जना गर्यो (जसमा एनोकले व्यवहार गरे) र कसले तिनीहरूलाई वैधता दिन्छ भन्ने प्रश्न (जसमा मैले व्यवहार गरे) बीचको भिन्नता छुट्याएको छु। मैले यहाँ वर्णन गरेको कुरा के हो भने परमेश्वरले नैतिक तथ्यहरू सिर्जना गर्नुभएन (तिनीहरू उहाँमाथि बाध्य छन्), केवल उहाँको आज्ञाले तिनीहरूलाई बाध्यकारी बल दिन सक्छ।
अब कसैले सोध्न सक्छ कि नैतिकतामा ईश्वर आफैंलाई के बाध्य पार्छ? यदि ऊ असल छ भने उसले पनि नैतिकतामा (उनको स्पष्ट व्यवस्थामा) प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। के उहाँ आफ्नै आज्ञामा बाँधिनु भएको छ? यो धेरै अनौठो छ, र वास्तवमा यो अघिल्लो स्तम्भबाट मेरो दावीको विरोधाभास हो कि एक बाह्य कारक आवश्यक छ जसले कानूनलाई डिक्टो वैधता दिनेछ।
मलाई लाग्छ कि यो भन्नु सही हुनेछ कि भगवान नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, तर यसलाई रोज्नुहुन्छ। उसले नैतिकता के हो भनेर छनौट गर्दैन (किनकि यो एक निरपेक्ष र कठोर तथ्याङ्क हो जुन उसको हातमा छैन) तर उसले आफ्ना सृष्टिहरूबाट नैतिक आचरणलाई खुशी पार्न र माग गर्ने छनौट गर्दछ। यो एरि एलोन तर्फको अघिल्लो स्तम्भमा मेरो दाबीसँग मिल्दोजुल्दो छ, कि एक व्यक्तिले नैतिकताको लागि कानून बनाउन सक्छ वा होइन, तर उसले नैतिकताको कानून आफैं बनाउन सक्दैन (के राम्रो हो र के खराब हो परिभाषित गर्नुहोस्)। यदि त्यसो हो भने, मानिस र ईश्वर दुवै नैतिकताको नियमले बाँधिएका छन्। राम्रो र खराबको परिभाषा उनीहरूलाई बाध्य पारिएको छ र उनीहरूलाई दिइएको छैन। तर परमेश्वरले नैतिकतालाई आदेश दिन सक्नुहुन्छ र यसरी यी परिभाषाहरू हामीलाई बाध्यकारी बल दिन सक्नुहुन्छ, र मानिसले त्यो गर्न सक्दैन।
म अब छविमा अर्को तह थप्नेछु। नैतिक तथ्यहरू (असल र खराबको परिभाषा) को अस्थायी अग्रिमको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो छ, किनकि उहाँ सधैं अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि केही थिएन किनभने उहाँको अगाडि समय छैन। त्यहाँ कुनै संसार छैन र हुन सक्दैन, एक काल्पनिक पनि, जसमा ईश्वर अवस्थित छैन। तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यहाँ यस्तो संसार हुन सक्छ जहाँ परमेश्वरले नैतिक हुन आदेश दिनुहुन्न (जबसम्म हामी मान्दैनौं कि उहाँको राम्रो स्वभावले उसलाई राम्रो गर्न र फाइदाको माग गर्न बाध्य पार्छ)। ध्यान दिनुहोस् कि हामीले अब सिकेका छौं कि नैतिकता ईश्वरीय आज्ञा भन्दा अगाडि छ, तर ईश्वर होइन। यो अस्थायी अग्रिम बारे हो। तर उही हदसम्म त्यहाँ एक पर्याप्त अगाडि पनि छ।
नैतिक तथ्यहरू ईश्वरीय आज्ञामा भर पर्दैनन्, न त तिनीहरू परमेश्वरको काम हुन्। तर परमेश्वर बिना नैतिकता अवस्थित छ भन्ने दावीको अझै कुनै अर्थ छैन। परमेश्वर नै एक हुनुहुन्छ जसको अस्तित्व आवश्यक छ भनी मान्दै (र यहाँ म धार्मिक ईश्वरको बारेमा कुरा गर्दैछु, र अघिल्लो स्तम्भबाट "दुबला" होइन), त्यसपछि त्यहाँ आवश्यक अस्तित्व रहेको वास्तविकताको बारेमा कुरा गर्न असम्भव छ। त्यो अवस्थित छैन। यसैले नैतिकता (वा नैतिक तथ्यहरू) कुनै आज्ञा बिना अवस्थित भए तापनि यो परमेश्वर बिना अवस्थित छ भन्न सकिदैन। यद्यपि दुबै समानान्तर रूपमा अवस्थित भए तापनि, नैतिक तथ्यहरू अझै पनि परमेश्वरमा भर पर्दैनन्।
तर अब हामी अलिकति फरक परिभाषामा पुग्न सक्षम हुन सक्छौं: नैतिक तथ्यहरू परमेश्वरको आत्मको हड्डी हुन् (यो शाब्दिक रूपमा "राम्रो गर्न राम्रो स्वभाव" हो), तिनीहरू अवस्थित छन् जसरी उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँ अनिवार्य रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ र सधैं। तिनीहरू अनिवार्य रूपमा अवस्थित छन् र सधैं। र अझै पनि तिनीहरूको वैधता स्थायी वा आवश्यक छैन। त्यसो गर्न आदेश नदिई तिनीहरूसँग कुनै बाध्यकारी बल हुँदैन।
परमेश्वर र आशेरको सेवा गर्ने बीचमा काम भएन
स्तम्भको सुरुवातमा मैले यस स्तम्भमा छलफल गरिएको ईश्वरको अवधारणा अघिल्लो स्तम्भको "दुबला" ईश्वर होइन (नैतिक कानून र नैतिक तथ्यहरूलाई वैधता दिन आवश्यक पर्ने ईश्वर) होइन भनेर जोड दिएँ। सँधै अवस्थित आवश्यकता छ भन्ने तथ्य र नैतिक तथ्यहरू सम्भवतः यसको शक्तिको अंश हुन् र राम्रो गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने तथ्यको सन्दर्भमा यहाँ दिइएका विभिन्न सुझावहरूको पुन: समीक्षा गर्दा तपाईंले यो महसुस गर्नुहुनेछ। र अधिक। यी सबै थपहरू हुन् जुन मैले अघिल्लो स्तम्भमा व्यवहार गरेको "पातलो" र न्यूनतम चीजलाई थोरै "फ्याट" बनाउँदछ।
यो किनभने वर्तमान स्तम्भमा छलफल पूर्णतया धर्मशास्त्रीय क्षेत्रमा स्थान लिन्छ, र मेटा-नैतिक मात्र होइन। वास्तवमा, Othipron दुविधा आफै धर्मशास्त्रीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। धर्मशास्त्र नभएको भए परमेश्वरले नैतिकताका नियमहरू परिभाषित गर्नुहुन्छ भनी दाबी गर्न समस्या हुने थिएन (किनभने उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने भनाइ उहाँको बारेमा तर्क हो र परिभाषा होइन) मान्न आवश्यक थिएन), तब दुविधा हुने थिएन। सिर्जना गरियो। साथै, दार्शनिक गणनामा पनि अघिल्लो स्तम्भमा मेरो भनाइमा कुनै विरोधाभास थिएन। यदि भगवानले राम्रो र नराम्रो (नैतिक तथ्यहरू) परिभाषित गर्नुहुन्छ भने यो मैले अघिल्लो स्तम्भमा तर्क गरेको कुरासँग पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ, र यो सम्पूर्ण स्तम्भको लागि आवश्यक थिएन। मेरो उद्देश्य यहाँ अघिल्लो स्तम्भबाट मेरो मेटा-नैतिक दावीलाई ईश्वरशास्त्रीय (यहूदी-क्रिश्चियन) विमानको ईश्वरसँग मिलाउन थियो जसमा उहाँ असल हुनुहुन्छ भन्ने धारणा छ। यो स्पष्ट धर्मशास्त्रीय छलफल हो (र मेटा-नैतिक होइन)।
धार्मिक मूल्यहरु को बारे मा Othipron दुविधा
विगतमा धेरै पटक मैले धार्मिक मूल्य र नैतिक मूल्यहरू बीचको भिन्नता औंल्याएको छु (उदाहरणका लागि स्तम्भ हेर्नुहोस् 15, मेरो पुस्तकको शुरुवात उभिएको बीचमा हिंड्छ र धेरै धेरै)। हलखाह र नैतिकता बीचको अन्तरविरोधको समाधान मैले प्रस्ताव गरेको छु कि यी दुई स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीहरू हुन्। एक्ट X हलाखिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन सक्छ (किनकि यसले धार्मिक मूल्य A लाई बढावा दिन्छ), तर एकै समयमा नैतिक रूपमा निषेध गरिएको छ (किनकि यसले नैतिक मूल्य B लाई अपमान गर्छ)। धार्मिक मानहरू अनैतिक छन्, र कहिलेकाहीँ तिनीहरू नैतिक मूल्यहरूको विपरीतमा खडा हुन सक्छन् र कहिलेकाहीँ केवल द्वन्द्वको स्थितिमा (जब द्वन्द्व केही परिस्थितिहरूमा मात्र उत्पन्न हुन्छ)। त्यस्ता अन्तरविरोधहरूमा कुनै बाधा छैन भन्ने मेरो भनाइ छ, र वास्तवमा यी विरोधाभासहरू होइनन् (यस्ता परिस्थितिहरूमा सैद्धान्तिक तहमा कुनै कठिनाइ छैन), तर द्वन्द्वहरू (के गर्ने भनेर निर्णय गर्न गाह्रो छ) भन्नु बढी सही हो। व्यवहारिक तहमा गर्ने)।
यस पछि, Tirgitz निम्न प्रश्न सोधे (bTalkback अघिल्लो स्तम्भमा):
यसको मतलब यो हो कि अर्को स्तम्भमा तपाईंले धार्मिक मूल्य र अन्य मूल्यहरूका सम्बन्धमा युफ्रोनसँग पनि व्यवहार गर्नुहुनेछ, जुन तपाईंको विचारमा मूल्यहरू हुन् जसको आधारमा Gd ले आफूलाई कुनै पनि नैतिक दायित्व हटाउन अनुमति दिन्छ। र यसको स्पष्ट अर्थ यो हो कि भगवानले पनि स्वेच्छाचारी रूपमा आफैलाई लागू गर्नुभएन।
म उनको प्रश्नको व्याख्या गर्नेछु। मेरो विधि अनुसार, ईश्वरले हामीलाई धार्मिक मूल्यहरू प्रवर्द्धन गर्न विरोधी नैतिक उपदेशहरू राख्न आदेश दिनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने, टिर्गिट्जले तर्क गर्छन्, यस्तो देखिन्छ कि धार्मिक मूल्यहरू पनि उनीमाथि बाध्य छन् र उनको मनमानी इच्छा (उनको सार्वभौम कानून) को परिणाम होइन। यदि आज्ञाहरू "हलाखिक तथ्यहरू" परमेश्वरमा थोपाएका थिएनन् तर उहाँको विधानद्वारा सृष्टि गरिएका थिए भने, उहाँले तिनीहरूलाई फरक रूपमा लागू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा म आशा गर्छु कि यदि उसले राम्रो गर्न चाहन्छ भने (र विरासतमा) उसले नैतिकता विरोधी कानूनहरू बनाउने छैन। द्वन्द्वको अस्तित्वले हलाखाह (वा धार्मिक मूल्यमान्यताहरू, जसलाई हलाखाहको समान कानूनले बढावा दिन्छ) लाई पनि Gd मा जबरजस्ती गरिएको छ, र त्यसैले यी द्वन्द्वहरूको आवश्यकताबाट बाहिर (वा हामीलाई धम्की) पक्राउ गरिएको छ।
यो एक महान प्रश्न हो, र मलाई लाग्छ कि उहाँ सही हुनुहुन्छ। जसरी नैतिक तथ्यहरू छन्, त्यहाँ हलाखिक तथ्यहरू पनि छन्। यी र ती परमेश्वरमा भर पर्दैनन् र उहाँमा बाध्य छन्। त्रयीको तेस्रो पुस्तकको सुरुमा मैले नैतिक आचरणको कान्टियन चित्रलाई हलाखिक चित्रसँग मित्जवाह गर्ने प्रस्तावलाई आज्ञाप्रति प्रतिबद्धताको सम्मानको रूपमा सम्मान गर्ने गरी तुलना गर्न लागेको थिएँ। यहाँ हामी देख्छौं कि यो समानता जारी छ।
यसले मलाई Tirgitz द्वारा अर्को प्रश्नमा ल्याउँछ, जुन केहि दिन पहिले सोधिएको थियो (थ्रेडमा रोलिङ छलफल हेर्नुहोस् यहाँ)। नैतिक सन्दर्भमा यो सोच्नु सामान्य छ कि मूल्यमान्यताहरू बीचको द्वन्द्वको स्थितिमा, यदि मसँग X गर्न र Y मा जानुको औचित्य थियो भने पनि, त्यहाँ अझै पनि समस्या छ कि म Y मा गएको छु। मलाई दुःख वा उदासी महसुस गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई चोट पुर्याउने वा अनैतिक काम गर्ने, मैले यो गर्नु परे पनि। टिर्गिट्जले सोधे कि के यस्तो दु: ख हलाखिक सन्दर्भमा पनि देखा पर्छ (Q।)बोलिएको: "तिम्रो लागि दु:ख र मेरो लागि दु:ख")। अर्थात्, म मिट्जवाहमा संलग्न भएको कारणले मैले लुलाभलाई हल्लाइन (अथवा म बिरामी भएको कारणले योम किप्पुरमा उपवास नगरेको) भनेर पछुताउनु पर्छ, जसरी म युद्धमा गएको कारणले मलाई मार्नुपरेको थियो। मानिसहरू (र कहिलेकाहीँ नागरिकहरू पनि)। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यस मामिलामा हलखाह र नैतिकतामा फरक छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न हो ।
मैले त्यहाँ उसलाई जवाफ दिएँ कि मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सन्दर्भहरू बीचको भिन्नता छ: नैतिक सन्दर्भमा यदि कुनै मूल्य अर्को मूल्यको अगाडि अस्वीकार गरिएको छ भने, मलाई अझै पनि अस्वीकृत मूल्य भन्दा बढि गएकोमा दुःख वा असन्तुष्टि महसुस गर्नुपर्छ (मैले एक व्यक्तिलाई चोट पुर्याएको छु)। । अर्कोतर्फ, हलाखामा कुनै दायित्व छैन र मैले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको छु भने मैले पूरा नगरेकोमा पछुताउने कुनै कारण छैन। यो पूर्ण रूपमा अनुमति छ र कसैलाई हानि छैन।
तर यो भिन्नताले मान्दछ कि हलाखाहमा केवल आज्ञा छ र जब कुनै आज्ञा छैन भने केहि भएको छैन। तर यहाँ उभिएको चित्रलाई हेर्दा यो भिन्नताबाट म आफैंमा फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि हामीले हलाखिक आज्ञा धार्मिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन गर्न आएको मान्छौं भने, मैले हलाखाहलाई न्यायोचित रूपमा उल्लङ्घन गरे तापनि (यसलाई अस्वीकार गर्ने अर्को हलाखाको कारणले), अझै पनि आध्यात्मिक संसारमा केही कुराले त्यसबाट हानि पुर्‍यायो (मैले हलाखिक तथ्यको विपरीत काम गरें र। आध्यात्मिक हानि ल्यायो)। मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको तस्विरले यस मामिलामा हलाखा र नैतिकतामा साँच्चै कुनै भिन्नता छैन भन्ने देखिन्छ।
यद्यपि थप विचारमा यो तर्क गर्न सकिन्छ कि सैद्धान्तिक रूपमा यदि मैले केहि अनुमति दिए भने आध्यात्मिक क्षति पनि जोगिने थियो (हेर्नुहोस् लेखहरू निस्तार चाडमा साइट्रिक एसिडमा, जहाँ मैले यस्तो लेख्ने स्रोतहरू ल्याएँ)। यो भन्न सकिन्छ कि Gd ले चमत्कार गर्दछ र क्षतिलाई रोक्छ ताकि म जस्तो धर्मी व्यक्ति जो कानूनप्रति वफादार छ, त्यहाँ कुनै दुर्घटना नहोस्। पक्कै पनि नैतिक तहमा यो हुँदैन। त्यहाँ मैले नैतिक मूल्यमा चोट पुर्‍याए पनि, क्षति अपरिहार्य छ। भिन्नता यस तथ्यबाट उत्पन्न हुन्छ कि नैतिक सन्दर्भमा यी भौतिक तथ्यहरू हुन् र हलाखिक सन्दर्भमा यी आध्यात्मिक तथ्यहरू हुन्। भगवानले भौतिकी परिवर्तन गर्नुहुन्न किनभने उहाँले भौतिक संसारको आचरणमा हस्तक्षेप गर्दैन, तर उहाँले आध्यात्मिक तथ्यहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ (किनभने आध्यात्मिक संसारमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। त्यहाँ यो यान्त्रिक रूपमा सञ्चालन हुँदैन)। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले नैतिक तथ्यहरू भौतिक तथ्यहरू होइनन्, तिनीहरू भौतिक तथ्यहरूमा निर्भर हुन्छन् (उदाहरणका लागि व्यक्तिलाई हानि वा पीडा)। उदाहरणको लागि, यदि मैले कसैको जीवन बचाउनको लागि पैसा चोरेको छु भने, त्यसलाई अनुमति दिए पनि र हुनसक्छ एक मित्वा पनि, चोरको नोक्सान भयो र पछुताउनु पर्ने कुनै कारण छैन (यहाँ यो चमत्कार हुनेछैन कि भगवान। उसलाई पैसा फिर्ता गर्नेछ)।
मैले अघिल्लो स्तम्भमा वर्णन गरे अनुसारको असर केसहरूको लागि हुनेछ, जहाँ स्पष्ट आदेशले कुनै नकारात्मक नतिजा नभए पनि मैले X गर्नुहुँदैन भनी बताउँछ। यस्तो अवस्थामा यस्तो देखिन्छ कि यदि चीज अर्को मूल्यको लागि अस्वीकार गरियो भने पछुताउनु पर्ने केहि छैन। यो हलाखिक क्षेत्रको अवस्था जस्तै छ। उदाहरणका लागि, मानौं मैले एक व्यक्तिको जीवन बचाउनको लागि एक हजार एनआईएस कर उठाउँछु। यस्तो अवस्थामा मलाई कर छलीको बारेमा पछुताउनु पर्दैन किनकि यसको कुनै नकारात्मक नतिजा आएको छैन (मैले अघिल्लो स्तम्भमा यो व्याख्या गरेको छु)। समस्याग्रस्त नतिजा जो अवस्थित छैन, बाहिर, यहाँ के छ वर्गीय क्रम को एक उल्लङ्घन मात्र हो, तर यो पक्कै पनि यी परिस्थितिहरूमा जायज थियो। वास्तवमा, यस्तो अवस्थामा मैले कुनै पनि वर्गीय आदेश उल्लङ्घन गरेको छैन भन्नु अधिक सही छ। सामान्य कानूनले जीवन बचाउन सबैले कर छल्नुपर्छ भनी बताउँछ।
 अघिल्लो स्तम्भमा मैले तर्क-विश्लेषणात्मक दावीको रूपमा विरोधाभासको कानूनलाई औचित्यको आवश्यकता पर्दैन भनेर व्याख्या गरेको थिएँ। यो अलि फरक कोणबाट एउटै विचार हो।
 भगवानले सबै गोलीहरू प्रतिरोधी भित्ता र सबै भित्ताहरू छिर्न सक्ने गोली बनाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नको बारेमा सोच्नुहोस्। यसको जवाफ पक्कै नकरात्मक छ, किनकि यदि उसले बनाएको बलले सबै भित्ताहरूमा छिर्छ भने त्यहाँ कुनै पर्खाल छैन जुन यसको प्रतिरोधी छ, र त्यसैले त्यहाँ कुनै पर्खाल छैन जुन सबै बलहरूमा प्रतिरोधी छ, र यसको विपरीत। भगवानको असक्षमताले त्यस्ता दुईवटा वस्तुहरू एकैसाथ सृजना गर्नुले उहाँको क्षमतालाई हानि गर्दैन। तार्किक स्तरमा मात्र यस्तो कुनै वास्तविकता छैन। हेर्नुहोस् यहाँ भगवानले उठाउन नसक्ने ढुङ्गा प्रश्नको निहितार्थ, रयहाँ प्राकृतिक खराबीको प्रश्नमा (दसौं अध्यायमा मेरो त्रयीको दोस्रो पुस्तक पनि हेर्नुहोस्)।
 निष्कर्ष यो हो कि उसको राम्रो (सीटी) हाम्रो भन्दा फरक छ। उहाँसँग बाध्यकारी कानूनहरू छैनन् जुन उहाँले पालन गर्नुहुन्छ, तर उहाँ एक हुनुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई वैधता दिनुहुन्छ। व्यक्ति स्पष्ट आदेश द्वारा बाध्य छ जसको वैधता उसलाई दिइएको छ, र त्यसैले यो अनुसार कार्य गर्न निर्णय गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, परमेश्वर प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, तर यसलाई वैधता दिन छनौट गर्नुहुन्छ। रामचाल भन्छन्– राम्रो गर्ने स्वभाव हो।
 स्तम्भको सुरुमा 278 मैले नेहमा ढकीसुफाको अवधारणाको चर्चा गरेको छु, र त्यहाँको छलफलले पनि यही प्रश्नको जवाफ दिन्छ जस्तो लाग्छ।
 Halakhah मा वर्गीकृत क्रम मा लेख हेर्नुहोस्, जसले halakhah र नैतिकता बीचको समानता को निरन्तरता देखाउँछ, तर यो समय यो तार्किक संरचना होइन सामग्री सरोकार छ। त्यहाँ म तर्क गर्छु कि वर्गीय अर्डरको हलाखिक स्थिति छ।
 म यहाँ एक प्रारम्भिक विचार ल्याउँछु जसलाई अझै ज्योति चाहिन्छ। मलाई लाग्छ कि सबै पछि केहि फरक छ। नैतिक सन्दर्भमा नैतिक मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्धता छ, तर हलाखाहमा त्यहाँ धार्मिक मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्धता र ईश्वरीय आदेश भएको कारणले आदेशको पालना गर्ने दायित्व दुवै छ (यसले धार्मिक मूल्यमान्यताहरूलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिए बिना। )। यहाँ धारणा यो हो कि नैतिकता मा कुनै ईश्वरीय आज्ञा छैन तर केवल एक ईश्वरीय इच्छा छ कि हामी यस तरीकाले कार्य गर्दछौं। हलाखाहको ढाँचा भित्र वर्गीय अर्डरमा मिट्ज्वाको स्थिति छैन (यद्यपि म यो हलाखिक स्थिति भएको दाबी गर्छु। मेरा लेखहरू हेर्नुहोस्। यहाँ).
यो पछ्याउँछ कि जब म योम किप्पुरमा व्रत बस्दैन किनभने म बिरामी छु, आज्ञाको आयाम वास्तवमा अवस्थित छैन, किनकि यस्तो अवस्थामा आज्ञा भनेको खानु र उपवास गर्नु हुँदैन। त्यसैले यो खानेकुराबाट कुनै हानि भएको छैन र पछुताउने कुरा पनि छैन। अर्कोतर्फ, नैतिक सन्दर्भमा, केही मूल्यलाई सही रूपमा अस्वीकार गरे पनि, यसलाई कायम राख्ने नैतिक दायित्व उस्तै रहन्छ (त्यसलाई पालना गर्न सकिँदैन। वास्तवमा, म तर्क गर्छु कि नैतिक द्वन्द्वमा यसलाई सधैँ अस्वीकार गरिन्छ। ' र 'अनुमति छैन')। तर हलाखामा परिणामात्मक आयाम (मित्जवाहबाट सृजित सुधार र उल्लङ्घनबाट खराबी) पनि छ, र यस सन्दर्भमा हामीले नैतिक सन्दर्भमा देखेका कुरासँग समानता देखिन्छ। यो de dicto को अस्तित्व र de re को अस्तित्व बीचको भिन्नता संग सम्बन्धित छ, र यस्तै।
bमा नोट हेर्नुहोस्लेखहरू अध्याय डी मा हलचा को सजाय मा, जहाँ म स्वर्ग को सजाय मा यान्त्रिक दृष्टिकोण को बिरूद्ध बाहिर आए।
"कसले सृष्टिकर्ता बनाउनुभयो" अपीलको जवाफ दिनुहोस्
→ अघिल्लो पोस्ट
अर्को पोस्ट ←
80 "विवादको प्रकाशमा ओथिप्रोन दुविधामा एक नजर (स्तम्भ 457)" मा विचारहरू
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 04:XNUMX बजे
एक मिडवाइफले उनलाई योम किप्पुरमा उपवास बस्नबाट रोकेकोमा पछुताउँछिन्। आज्ञाको सन्दर्भमा यो पूर्ण रूपमा कभर गरिएको छ - यो छुट छ। यसको विपरित, आत्मा र आत्माको रेखदेख गर्ने आज्ञा ठूलो पार्छ। तर उनलाई पछुतो छ, यद्यपि उनीलाई राम्ररी थाहा छ कि उनको मित्भा यस समयमा खाने हो, किनभने उनको उपवास छैन। उनीसँग व्रत, शुद्धि र प्रायश्चितको दिनको अभाव छ। यी भावनाहरूलाई अफरा दारा भनेर खारेज गर्ने र 'मनोविज्ञान' को बहानामा खारेज गर्ने - तपाईंले विचार नगर्ने तर्कहरू? वा यहाँ अर्को सामग्री छ जुन एक हिसाबले नैतिक मिसको शोकसँग मिल्दोजुल्दो छ?
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/17 01:XNUMX बजे
म यो शोकलाई पूर्ण रूपमा बुझ्छु, र मलाई यो पनि लाग्छ कि यो निश्चित रूपमा ठाउँ छ। मैले के छलफल गरेको छु त्यो पछुताउनु पर्ने चासो/बाध्यता (हलाखिक होइन) छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, म मनोवैज्ञानिक स्तरको सट्टा मानकसँग व्यवहार गर्दैछु। यदि मानिसहरूले फुटबल खेल हारे भने उनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, त्यसोभए के तपाईं सरायको रूपमा पुजारी बन्नुहुन्न?!
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/17 18:XNUMX बजे
मैले सोधेको छैन कि तपाईले दु:ख बुझ्नुहुन्छ, जब सम्म तपाईले यसमा नैतिक मूल्यको हानिको नजिक वा समान मूल्य देख्नुहुन्न। फुटबल खेल नछुटाउनु हुँदैन।
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/17 49:XNUMX बजे
उस्तै हदसम्म होइन, यदि हो भने। मैले स्तम्भमा जे लेखेको छु, त्यही अनुसार कसैले कानुनी रूपमा काम गरेमा Gd ले आत्मिक हानि हुनबाट जोगाउँछ भनी मानेर केही भएन । र यदि उसले आफ्नो हानि (अनुभवको हानि) मा पछुताउँछ भने - यो पक्कै पनि उसको अधिकार हो तर यसको कुनै मूल्य छैन। सायद यसले एक प्रकारको यारोशलाई अभिव्यक्त गर्दछ किनकि दुःखले देखाउँछ कि चीजहरू उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तर नैतिक शोक भनेको अभिव्यक्ति भन्दा बाहिरको कुरा हो जुन मूल्य उसको लागि महत्त्वपूर्ण छ। दावी कि केहि समस्याग्रस्त यहाँ भयो, बाहेक म दोषी छैन। हलाखिक परिप्रेक्ष्यमा केहि समस्याग्रस्त भएको छैन। धेरैमा तपाईंले अनुभव गुमाउनुभयो।
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 13:XNUMX बजे
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ परमेश्वरको बारेमा नैतिक प्रश्नहरू छन् भन्ने तथ्यको कुनै प्रमाण छैन कि नैतिकता उहाँमाथि बाध्य छ।
यी प्रश्नहरूले मात्र मानिन्छ कि परमेश्वरले नैतिकताको आदेशलाई सर्वोच्च सिद्धान्तको रूपमा रोज्नुभयो, र त्यसैले सोध्नुहोस् कि उहाँले आफैलाई कसरी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 18:XNUMX बजे
शार्पनर - प्रश्न स्पष्ट छ र विवादास्पद छैन। अर्थात्, यो उनको लागि स्पष्ट छ कि त्यहाँ यसको लागि नैतिक औचित्य छ, किनकि उनी मान्दछिन् कि नैतिकता भनेको पेटले रोजेको सिद्धान्त हो।
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/17 03:XNUMX बजे
मैले सोचेकी थिइनँ कि ऊ टक्कर भयो। यसबाहेक, यदि यो राम्रो छ भने, त्यसपछि प्रेरणा महत्त्वपूर्ण छैन। तर मलाई लाग्छ कि तपाईंले यी प्रश्नहरूको धुन गुमाउनु भएको छ: तपाईंले तिनीहरूलाई तार्किक प्रश्नहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ (यसको संगतताको बारेमा), तर यी प्रश्नहरू नैतिक छन्। यो जस्तो छ कि अब्राहाम जसले आफ्नो छोराको आज्ञापालन गर्न आदेश दिएका थिए Gd को एकरूपताको बारेमा मात्र आश्चर्यचकित हुनेछन् जसले इसहाकले उसलाई सन्तान भन्ने वाचा गरे, र Gd ले कसरी यस्तो आदेश दिन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गरे। तपाईका लागि यी दुई समान तार्किक प्रश्न हुन्। कविहरूले भनेको त्यो होइन।
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 35:XNUMX बजे
Tirgitz को प्रश्न को रूप मा - यो साँच्चै एक राम्रो प्रश्न हो, किनभने भावना नैतिक कर्तव्यहरु भन्दा Halacha फरक छ (जस्तै Maimonides मानसिक र श्रवण आज्ञाहरू बीच विभाजन गर्दछ, आदि)। यो व्याख्या गर्ने एउटा तरिका यो हो कि Gd सम्पूर्ण आध्यात्मिक सेटको अधीनमा छ जसको हामीले कुनै प्राप्ति गर्न सक्दैनौं - र त्यसपछि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा सोधिनेछ - यदि Gd कानूनको यस्तो विपरित सेटको अधीनमा छ भने, स्पष्ट रूपमा यो नियमहरूको सेट। एक उच्च प्राणी हो, एक प्रकारको स्पिनोजा ईश्वर व्यक्तिगत र उदासीन होइन, तर "प्राकृतिक" गैर-भौतिक संसारमा। यो मलाई लाग्छ कि परमेश्वरको कानूनको अधीनताको प्रश्न तार्किक कानूनको मामिलामा अस्तित्वमा नहुनुको लागि धेरै कमजोर छ, तपाईंले व्याख्या गरे जस्तै (तिनीहरू "कानूनहरू" होइनन्), र नैतिक कानूनको मामिलामा अलि बलियो छ। , किनकि तपाईंले तर्क गर्नुभएको छ - थोरै संकीर्ण तर दावी म स्वीकार गर्न सक्छु - कि तिनीहरू समान रूपमा आवश्यक छन्। तर जब यो हलाखिक कानूनको कुरा आउँछ, यो स्वीकार गर्न अलि गाह्रो छ, मेरो विचारमा। किनभने तिनीहरूको आवश्यकताले संसारको सिर्जना समावेश गर्दछ जहाँ तिनीहरू आवश्यक छन्, देखिन्छ, र यसको अनुहारमा यो अनावश्यक देखिन्छ (तर्क यो हो कि तिनीहरू उच्च सम्भावित स्तरमा आवश्यक छन्, तर अझै पनि तिनीहरूलाई बुझ्न असम्भव छ - जुन ठूलो जरुरी छ, यी नियमहरु संगै संसार सृष्टि नभएसम्म दबाउन कठिनाई)। यो नैतिकताको नियमहरूमा पनि सत्य हो (""कारण दुखाइ खराब छ" एक दावी हो जुन संसारमा मात्र सान्दर्भिक छ जहाँ पीडा छ - र ठूलो प्रश्न यो हो कि परमेश्वरले संसारमा दुख किन सिर्जना गर्नुभयो र उहाँले किन भन्नुभएन। पीडाको कारण हुनु हुँदैन), र अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा यो संसारमा बलियो देखिन्छ म जहाँ नियमहरू अधिक मनमानी देखिन्छ। जे भए पनि, यसले परमेश्वरलाई आफूभन्दा अघिको संसारमा राख्छ र उहाँमाथि कुनै नियन्त्रण छैन। वैसे, यस प्रश्नको सामना गर्ने अर्को सैद्धान्तिक सम्भावना छ, जसको बारेमा मलाई थाहा छैन - भगवानले एउटा यस्तो संसार रोज्न सक्नुहुन्छ जहाँ नैतिकताका नियमहरू मात्र मानव कर्तव्यको रूपमा सान्दर्भिक छन्, र उहाँले रोज्न सक्नुहुन्छ। संसार जहाँ यी कानूनहरू आफैंलाई अन्य मूल्यहरू विरुद्ध अस्वीकार गरिन्छ। तिनीहरू जे पनि हुन सक्छन् र उहाँको छनौटको अधीनमा छन्। र उसले दोस्रो विकल्प रोज्यो किनभने यस्तो अवस्था बिना, हामीले यी कानूनहरू हेर्दैनौं, तिनीहरू स्वयं स्पष्ट थिए (जस्तै माइमोनाइड्सले ज्ञानको रूख र कागजातको बारेमा लेख्छन्)। यस सम्भाव्यता अनुसार - नैतिकताको नियमहरूको विरोधाभास गर्ने हलाखिक संसारको अस्तित्व कहिलेकाहीँ केही बाह्य कारणका लागि जायज हुन्छ, आवश्यक छैन, र नियमहरूको सम्पूर्ण संसार आवश्यक पर्दैन जसको अधीनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, उल्लेख गरिएझैं, यस्तो संसार सिर्जना गर्ने निर्णय नै शंकास्पद लाग्न सक्छ।
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/17 07:XNUMX बजे
मैले दाबी बुझिन। म तपाईको टिप्पणीका दुई बुँदाहरूमा मात्र टिप्पणी गर्नेछु (जसलाई मैले बुझेको छु भन्ने आशा गर्दछु):
1. कानून लागू हुँदैन। राम्रो र नराम्रो को परिभाषा आवश्यक छैन तर शायद एक तथ्य हो। तसर्थ, तिनीहरू ईश्वरभन्दा उच्च छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा बोल्ने केही छैन।
2. नैतिकता को नियम पनि हाम्रो संसार मा मात्र कानून हो। यदि अर्को संसार सृजना गरिएको थियो जुन पूर्णतया भिन्न रूपमा निर्मित प्राणीहरूसँग पूर्णतया भिन्न थियो (तिनीहरूलाई कुनै दुःख र पीडा थिएन), त्यसपछि अन्य कानूनहरू यसमा लागू हुने थिए। तर यदि ती नैतिक नियमहरू थिए भने यी हाम्रा ती नैतिक नियमहरू ती परिस्थितिहरूमा लागू हुन्छन्। तपाईले हलाखाको बारेमा वर्णन गर्नुभएको कुरा हो, त्यसैले त्यहाँ कुनै फरक छैन जस्तो देखिन्छ।
उनका छोराहरू यित्जाक कोरेन
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/20 32:XNUMX बजे
"प्रकारको प्रत्येक पहिचान दावी: ए बी हो। यो दाबी सहि हो भनी मान्दै, त्यसो भए यसको वास्तवमा अर्थ हो:aहो, जसको अर्थ खाली ट्याटोलोजी हो।" - मलाई यहाँ समस्या खोज्न गाह्रो छ। यो दावी सही छ भनी मान्दै, यो तार्किक रूपमा दावी A = A, तर 1 + 1 =2र अन्य कुनै सही दावीको दावी गर्न बराबर छ। यदि वाक्यको अर्थ यसले थपेको जानकारी हो भने, कुनै वाक्यको "अर्थ मान्नु भनेको सत्य हो।" यदि हामीले यो सत्य हो भनी मान्‍छौं/जान्‍छौं भने, यो साँचो हो भनी फेरि भन्नुले हामीलाई जानकारी थप गर्दैन, र त्यसैले महत्त्वपूर्ण छैन।
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/20 44:XNUMX बजे
र अर्को शब्दमा: उहाँसँग अर्थ छ र शिक्षा छैन।
तिम्रो बुबाको नैतिकता
A. बदेर B. H. 03 - 03/2022/23 10:XNUMX बजे
सुन्दर उथ्रोन दुविधा मूर्तिहरूको लागि हो, जो पूर्णतया अस्पष्ट छन् कि उनीहरूलाई नैतिकताको साथ कुन हदसम्म चिनिन्छ। बरु, पौराणिक कथाहरू अनुसार यो स्पष्ट छ कि तिनीहरू ईर्ष्या र शक्तिले भरिएका छन्।
यसको विपरीत, इस्राएलका परमेश्वर सत्यको स्रोत र असलको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ नैतिकता र सत्यको 'विषय' हुनुहुन्न। उहाँ तिनीहरूको पूर्ण शुद्धतामा सत्य र नैतिकता हुनुहुन्छ। हामी सृष्टिकर्ताको रूपमा कि हाम्रो ज्ञान सानो टुक्रा हो। हामी हाम्रो इन्द्रिय, हाम्रो इन्द्रिय र हाम्रो अध्ययन द्वारा अलिकति जान्दछौं, तर हामी के जान्दछौं पूर्ण चित्रबाट एक सानो टुक्रा हो, जुन केवल संसारको सृष्टिकर्तालाई मात्र थाहा छ र केवल उहाँलाई मात्र यसको उद्देश्य थाहा छ।
सृष्टिकर्ताको मार्गको बारेमा हाम्रो नैतिक कठिनाइहरू बच्चाको कठिनाइहरू जस्तै छन् जसले आफ्नो बुबाले आफ्नो हात किन पिट्छ जब उसले भर्खरै बिजुलीको आउटलेटमा हथौडा टाँस्ने प्रयास गर्दा, र आफ्नो बुबालाई किन सुम्पियो भनेर बुझ्दैन। सेतो ढुङ्गाहरूको क्रूर झुण्डले आफ्नो चक्कु निकाल्दै दुर्भाग्यपूर्ण केटाको मासु च्यात्दै।
मानव आमाबाबुको हकमा, हामीले बच्चालाई बिजुलीको झटकाबाट बचाउनको लागि हातमा प्रहार आउँछ र 'सेतो लुगामा चक्कुहरू तानेर' बच्चाको जीवन बचाउने शल्यक्रिया गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्ने विशेषाधिकार हामीले पहिले नै पाएका छौं। संसारको सृष्टिकर्ताको कार्यहरू जस्तै, जसले मानवतालाई तिनीहरूको गहिराइको अलिकति बुझ्नको लागि सयौं वर्षको अनुसन्धान लगायो - कि हामीले हाम्रा सृष्टिकर्तालाई केही 'श्रेय' दिन अनुमति दिएका छौं, कि उहाँले दुःख र यातना दिनुभयो। हाम्रो लागि पनि राम्रो छ, हामीलाई करिडोरमा तयार गर्न। 'लाउन्ज', र हामीलाई हाम्रो हृदयले थाहा दिनुहोस् कि 'जब एक बुबाले आफ्नो छोरालाई पीडा दिन्छ तब परमप्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंलाई सताउनुहुन्छ'।
सादर, Othipron Nefshatim Halevi
'तपाईंको बुबाको नैतिकता' र 'आमाको शिक्षा' - जुवा स्वीकार गर्ने कि बुझाइ र पहिचान?
A. बदेर B. H. 04 - 03/2022/02 05:XNUMX बजे
यदि सृष्टिकर्तासँग आफ्नो इच्छा र वस्तुगत असल बीचको पूर्ण पहिचान छ भने, मानिसले राम्रो के हो र के सही हो भन्ने भावना र आफ्नो सृष्टिकर्ताबाट प्राप्त निर्देशनहरू बीचको अन्तर हुन सक्छ। र यो खाडल 'सम्भव' मात्र होइन आवश्यक छ, तर जबसम्म व्यक्तिले कोनोको इच्छालाई अझ गहिरो र बुझ्छ तबसम्म यो कम हुन्छ।
यसको अनुहारमा, मानिसले नबुझे पनि संसारको सृष्टिकर्ताले न्यायमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चितताबाट जुवा स्वीकार गरेर सन्तुष्ट हुन सक्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। किनभने व्यक्ति कोनोप्रति वफादार 'दास' मात्र होइन, 'विद्यार्थी' पनि हुनुपर्छ जसले स्पष्ट निर्देशन नपाएका परिस्थितिहरूमा पनि कोनोको इच्छालाई कसरी बुझ्ने भनेर जान्दछन्।
'दास' को लागि 'त्यसो गर्नुहोस्' वा 'त्यसो गर' भन्नु पर्याप्त छ। उसले स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नगरी एक कदम पनि चाल्दैन, तर एक 'विद्यार्थी' हुनको लागि जसले 'कुनै कुराबाट केही बुझ्न' आवश्यक हुँदा पनि आफ्नो रब्बीको इच्छालाई कसरी निर्देशित गर्ने भनेर जान्दछ, त्यहाँको बुझाइ हुनुपर्छ। चीजहरूको अर्थ, जसद्वारा उसले सिद्धान्तहरू लागू गर्न सक्छ।
यस उद्देश्यका लागि, एक लिखित टोराह दिइएको थियो जुन माथिबाट 'ट्याब्लेटहरूमा कुँदिएको' शब्दद्वारा निर्देशित गरिएको थियो, तर यो 'मौखिक टोराह' पनि हुनुपर्दछ जसले टोरा नियमहरूको अर्थ र तर्क बुझ्न खोज्छ, र यसको गहिराइ बुझ्न खोज्छ। टोरा कानून - एक चीज को आत्मा अवशोषित गर्न सक्नुहुन्छ।
मौखिक टोराह जसले स्वतन्त्रताको नियमलाई स्पष्ट गर्दछ - मानिसलाई 'यिफ्रोन' को दुविधाबाट मुक्त गरिएको छ, किनकि सृष्टिकर्ताको इच्छा जुन 'बाह्य जुवा प्राप्त गर्न' को रूपमा सुरु भएको थियो - अधिक र अधिक 'टोरा डेलिया' बन्छ। उसले बुझ्छ र पहिचान गर्छ।
भवदीय, Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
सहि र गलत
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/03 12:XNUMX बजे
"तर जब पाप [ज्ञानको रूखमा भएको मानिस] लाई एउटै बौद्धिक उपलब्धिबाट वञ्चित गरेर दण्ड दिइन्छ ... र त्यसैले भनिन्छ 'र तिमी असल र खराब जान्ने भगवानजस्तै थियौ' र 'झूट र सत्यको जान्ने' वा नभने। 'झूट र सत्यको प्राप्तिकर्ता'।
र आवश्यक चीजहरूमा असल र खराब कुनै पनि हुँदैन बाहेक झूट र सत्य "(सोम, भाग १, P.B.)
हुनसक्छ यहाँ माइमोनाइड्सले नैतिक तथ्यहरूको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको छ र Eitpron दुविधालाई हटाउँछ?
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/10 30:XNUMX बजे
स्तम्भ 177 हेर्नुहोस् जहाँ मैले यो शिष्टता हो र नैतिकता होइन भनेर व्याख्या गरेको छु।
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/12 59:XNUMX बजे
सन्दर्भको लागि धन्यवाद, मैले पढें, मैले नबुझेको हुन सक्छ, तर मैले माइमोनाइड्सका शब्दहरूमा समस्या देखेको छैन।
यो वाक्य दुई भागमा विभाजित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ:
"अनि तपाईं असल र नराम्रो जान्ने भगवान जस्तै हुनुहुन्थ्यो" - यो सेलिब्रेटीहरू, सुन्दर र अश्लील, राम्रो वा खराबको लागि तपाईंमा विकसित भएको जागरूकताको बारेमा हो। त्यसैले अब नैतिकता पनि राम्रो नराम्रो लाग्छ।
"र [पद] ले झूट र सत्य वा झुट र सत्य प्राप्त गर्नेहरूलाई भनेन, र आवश्यक चीजहरूमा असल र नराम्रो कुनै झूट र सत्य बाहेक केही हुँदैन" - यहाँ माइमोनिड्स भनेको नैतिकता हो। अर्थात्, यस अर्थमा तपाईले ईश्वरबाट टाढा जानुभएको छ र तपाईले पहिले नैतिकतालाई सत्य र असत्य भन्ने तथ्यात्मक-दिव्य श्रेणीमा बुझ्ने बौद्धिक क्षमता गुमाउनुभएको छ।
यसलाई प्रश्न र उत्तरको रूपमा पढ्नुपर्छ - र पदले "झूट र सत्य" किन भनेन? उत्तर - किनभने तपाईंले यो गुमाउनुभयो। तर तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि वास्तवमा, भगवानसँग आवश्यक चीजहरू (नैतिकता) राम्रो र खराब होइन तर गलत र सत्य हुन्। र यहाँ Eitpron को दुविधा अनावश्यक छ।
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/13 52:XNUMX बजे
मलाई अब सही शब्दहरू याद छैन, तर मैले महसुस गरें कि यो केवल शिष्टताको बारेमा थियो र नैतिकता होइन। जे भए पनि, यदि तपाइँ सही हुनुहुन्छ भने पनि Maimonides मा केहि कथन छ जसले Eitpron को दुविधालाई हटाउन सक्दैन। धेरैजसो तपाईले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि दुविधामा माइमोनाइड्सको आफ्नै स्थिति थियो।
नैतिकता-करुणा वा नैतिकता-निरोध?
24 Adar 03 2022 - 00/50/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
Adash XNUMX मा SD ACH Tov मा
विरोधाभासहरू 'धर्म' र 'नैतिकता' बीच होइन तर 'करुणाको नैतिकता' र 'निरोधको नैतिकता' बीचको हो। अर्कोतर्फ, Detersh सँग पापीलाई एक क्रूर बदला ल्याउनको लागि रोकथामको नैतिकता छ जसले भविष्यको पापीबाट अपराधको पुनरावृत्तिको सबै 'ओह आमेन' हटाउनेछ।
यहाँ हामीलाई 'ईश्वरीय आदेश' चाहिन्छ जसले सही खुराक दिन्छ जसले महत्त्वपूर्ण प्रतिरोधको आवश्यकता र दया र सुधारको लागि अनुमति दिने ईश्वरीय इच्छा बीच सन्तुलन ल्याउनेछ।
तसर्थ, उदाहरणका लागि, प्रतिरोधले घृणा र दुष्टताको विचारधारा विकास गर्ने मानिसहरूलाई जराबाट उन्मूलन गर्न आवश्यक छ - अमालेक र कनानका मानिसहरू - र अर्कोतर्फ करुणाले तिनीहरूलाई पहिले शान्तिमा बोलाउन र 'दिशा परिवर्तन' गरेर भाग्न अनुमति दिनुपर्छ। विश्वास र नैतिकता को आधारभूत मूल्यहरु लाई स्वीकार गरेर।
सादर, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas चेरी
A. बदेर B. H. 04 - 03/2022/01 49:XNUMX बजे
उठाएको संगमरमर गोल त्रिकोण। यो यस्तो चीज हो जसले त्रिभुजका सबै गुणहरू र वृत्तका सबै गुणहरूलाई पनि राख्छ।
गोलाकार त्रिभुज दुवै गोलाकार र तीन सीधा रेखाहरु बनेको छ।
यद्यपि यो दैनिक जीवनको तर्कको विरोधाभास हो, सौभाग्यवश वास्तविकता हाम्रो तर्कको आवाजमा नृत्य गर्दैन। नत्र हाम्रो अस्तित्व हुने थिएन ।
A. बदेर B. H. 04 - 03/2022/14 20:XNUMX बजे
मलाई लाग्दैन कि तपाईंले वर्णन गर्नुभएको तस्बिरले धार्मिक मूल्यहरू भगवानमा जबरजस्ती गरिएको छ भनेर देखाउँछ। उहाँ जे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैं एक अख्तियार हुनुहुन्छ जसले निर्धारण गर्न सक्छ कि निश्चित धार्मिक मूल्यहरू (उहाँले सिर्जना गर्नुभएको) नैतिकताका मूल्यहरूलाई अस्वीकार गर्न पर्याप्त महत्त्वपूर्ण छन्। नैतिक मूल्यहरू बाध्यकारी छन् भन्ने तथ्यले प्राथमिकताहरूको सूचीमा तिनीहरू पहिलो हो भन्ने होइन।
A. बदेर B. H. 04 - 03/2022/14 23:XNUMX बजे
तपाईंले मेरो (वा टिर्गिजको) तर्क बुझ्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ। धार्मिक मूल्य मान्यता उसको हातमा छ भन्ने अर्थ उसले चाहेअनुसार निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने मानेर नैतिकता विपरीत धार्मिक मूल्य निर्धारण गर्ने संसारमा कुनै कारण छैन। यदि उसले नैतिकता अनुरूप धार्मिक मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ भने यो किन? धार्मिक मूल्यमान्यता पनि उसको हातमा छैन भन्ने बुझिन्छ ।
A. बदेर B. H. 04 - 03/2022/15 55:XNUMX बजे
यदि त्यसो हो भने मैले वास्तवमै पहिले बुझिन, तर त्यो पनि मेरो विचारमा दिमागमा आउँदैन, दुई कारणहरूका लागि:
1. नैतिकतासँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो धार्मिक प्रणाली सिर्जना गर्न सम्भव नहुन सक्छ (दुष्टविना संसारको सृष्टिको बारेमा तपाईको भनाइ अनुसार)। यसको मतलब यो होइन कि उनी उनीमाथि बाध्य छन्, किनकि नैतिकताको साथ परिस्थितिको विपरीत उसले यसलाई पूर्णतया त्याग्न सक्छ। तर उसले कुनै कारणले एउटा चाहान्छ भनी मान्दै, यो निश्चित नैतिक मूल्यहरूसँग टक्कर हुनुपर्छ। उसले सायद एउटा रोजेको छ जुन कम्तिमा सत्य हुन्छ, र यसले टोरा मानहरू र नैतिक मूल्यहरू बीचको महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई पनि बताउँछ।
२. टोरा मूल्यको अस्तित्वको कारणले नैतिक रूपमा हानि हुने जो कोहीलाई पनि परमेश्वरले यस संसारमा वा भविष्यमा क्षतिपूर्ति दिन सक्नुहुन्छ। उसले यो सुनिश्चित गर्न सक्छ कि समग्र सारांशमा उसको खुशीको डिग्री टोरा मूल्य बिना हुनु पर्ने जस्तै हुनेछ।
J. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 36:XNUMX बजे
1. त्यसोभए यसको मतलब यो उसलाई बाध्य पारिएको हो। यदि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रणाली सेट गर्छ भने त्यहाँ कुनै बाधा छैन भने नैतिकता अनुरूप के रोक्छ?
2. उसले परिवर्तनको लागि क्षतिपूर्ति दिन सक्छ भन्ने कुरा सत्य हुन सक्छ। तर संसारमा त्यसो गर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले नैतिकता अनुरूप यी मूल्यहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
J. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 52:XNUMX बजे
1. उसले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रणाली सेट गर्दछ, तर यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ सम्भावनाको ठाउँमा0नैतिकताको उल्लङ्घन भएको धार्मिक मूल्यहरूको प्रणाली छ। उसले कुनै धार्मिक प्रणाली स्थापना गर्न सक्दैन, वा नैतिकतालाई कम्तिमा हानि गर्नेहरू मध्येबाट छनौट गर्न सक्दैन।
जसरी उसले संसार सृजना नगर्ने छनौट गर्न सक्यो, तर (सायद) यस संसारका सबै फाइदाहरू सहित तर ० खराबीले संसार बनाउन सकेन। यसको मतलब यो होइन कि संसारको सृष्टि उहाँमाथि जबरजस्ती गरिएको छ, तर यदि उसले स्वतन्त्र छनोटको साथ संसार बनाउन चाहन्छ भने त्यसमा खराबी पनि हुनेछ।
J. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 32:XNUMX बजे
यो जिद्द बुझेन।
यदि उसमा निर्भर नभएको कुनै प्रतिबन्ध छैन भने, कोहेनकी पत्नीलाई आफ्नो पतिबाट अलग गरिनुपर्छ भन्ने निर्णय नगर्न उनलाई के रोक्छ? उहाँले विपरीत निर्धारण गर्न सक्नुहुन्थ्यो (हामीलाई यो विवरण बिना टोरा दिनुहोस्)। कुन बाधाले उसलाई त्यसो गर्नबाट रोक्छ? दुष्टताको सन्दर्भमा, मैले वर्णन गरें कि प्रकृतिको कठोर नियमहरू पीडा र खराबीको बिन्दु बिना अवस्थित हुन सक्दैन। अर्को व्यवस्था छैन । तर धार्मिक कानूनहरूको प्रणालीहरूले तिनीहरूमा कुनै बाधाहरू छैनन्। तिनीहरू मनमानी छन्। त्यसोभए धार्मिक सन्दर्भमा के ले उहाँलाई कोहेनकी पत्नी बिना मात्र चौध आज्ञाहरू निर्धारण गर्नबाट रोक्छ?
J. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 34:XNUMX बजे
रब्बी नराली, तपाईंले स्तम्भ लेख्नुपर्छ (वा तपाईंले लेख्नुभयो र मलाई थाहा छैन)
हलाखाको अंशको सम्बन्धमा जुन वास्तविकताले बाँधिएको छ साथै अनुमति र अस्वीकृत, इत्यादि।
J. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 45:XNUMX बजे
मैले अनुरोध बुझिन
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/15 24:XNUMX बजे
[विजेताको रूपमा विजेता नभएको कुरा तपाईंले गर्नुभयो। मैले भर्खरै केहि अस्पष्ट महसुस गरें (र यो तपाइँको शब्दहरूबाट मलाई पनि बाहिर आयो) र तपाइँले निर्दिष्ट गर्नुभएको तीखो तरिकामा होइन]
द्वन्द्वको कुरा गर्दा हलखाह र नैतिकतामा कुनै भिन्नता छैन भनी चित्रले देखाउँछ, तर आखिरमा, सबै मानिसहरूले यो भिन्नतालाई बुझ्छन् र आफ्नो अन्तर्ज्ञानलाई आधामा लिनु उपयुक्त हुन्छ। यदि कसैले मित्वा वा यसको अस्तित्वको साथमा रहेको विशेष अनुभूति प्राप्त गर्न नसकेकोमा पछुताउँछ भने, मैले अस्वीकार गरेको कारणले लाओबाट गुज्रिएकोमा कुनै व्यक्तिलाई पछुताएको सुनेको छैन। , र यो स्पष्ट रूपमा Tza'a हो), र नैतिकतामा, सामान्य मानिसहरूले पनि शब्बातमा कोशेर गैरजातिहरूलाई बचाउनबाट परहेज गर्ने जस्ता नैतिक कानूनको उल्लङ्घन गरेकोमा पछुताउँछन्।
त्यसोभए तपाईंले यसलाई सिद्धान्तको साथ व्याख्या गर्नुभयो कि हलाखाहमा भगवानले आध्यात्मिक क्षतिहरू सुधार गर्दै हुनुहुन्छ र नैतिकतामा भौतिक क्षतिहरू मर्मत गर्दैनन्। तर कसरी जवाफ दिन्छ, यदि नैतिकता छैन भने मानिसले शारीरिक हानिको के वास्ता गर्छ? के तिनीहरू (र म सामान्यतया) केवल गलत छन् र यहाँ कुनै मानक तनाव छैन तर केवल अज्ञानताको भावना छ?
व्याख्या गर्नको लागि स्पष्ट रूपमा जोड्नुपर्दछ कि जबसम्म आज्ञाहरू रहँदैन र तिनीहरू अस्वीकार गरिए पनि प्रत्येक आज्ञा अस्तित्वमा रहन्छ। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि आदेश भनेको व्यावहारिक निर्देशन होइन "अब त्यसो गर्नुहोस्" तर सैद्धान्तिक निर्देशन हो, र द्वन्द्वको सट्टा वास्तवमा यहाँ आज्ञा छ र यहाँ आज्ञा छ र त्यसैले द्वन्द्व र स्पष्ट निर्णयको सट्टा पनि समस्या छ। । (त्यो बाहेक विभिन्न आध्यात्मिक तथ्यहरूमा पुग्नु आवश्यक छैन)।
र, मूलतया यही हो राकाले भनेका छन् (वास्तवमा यो उत्सवको अभियानमा आवश्यक र नवीकरणमा लेखिएको हो जुन तपाईंले मलाई उल्लेख गर्नुभयो। मैले अभियानको अध्ययन गरेन तर उनले भनेका थिए कि यदि कसैले रोश हशनाहमा शोफर फुकायो जुन खस्छ। शब्बातमा वास्तवमा तर सिद्धान्त। यो कुरा मैले *साच्चै* बुझिन, मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ? (त्यहाँ जवाफमा तपाईले लेख्नुभयो कि तपाई वास्तवमै यस्तै सोच्नुहुन्छ)। यो आज्ञा व्यवहारिक निर्देशन हो, एकातिर म आज्ञा क र अर्कोतिर म आज्ञा ख र वास्तवमा म आज्ञा ख भन्छु भन्ने कुनै अर्थ देख्दिन।
J. Bader B. H. 06 - 03/2022/16 04:XNUMX बजे
बुझ्दिन किन मित्स्व गुमाउनुको दु:ख देख्दैनौ। अवश्य पनि यो सम्बन्धित छ। कोही जस्तै जो अदालतमा मेम होइन किनभने ऊ बिरामी छ। र कथाहरू रब्बीहरूको बारेमा थाहा छ जसले उसलाई आश्वस्त पार्छ र उसलाई भन्छ कि यो उसको परिस्थितिमा उसको कर्तव्य हो। त्योभन्दा माथि, त्यसो गर्दा यो सामान्य अवस्था होइन र मानिसहरू यसको बानी परेका छन्। उदाहरणका लागि, ऊन र सूती कपडामा, शतनाज छ भनेर कसैले याद गर्दैन। तर USSR मा एक बिरामी मा यो एक दुर्लभ अवस्था हो र धेरै माफ गर्नुहोस्।
निस्सन्देह मानिसहरूले अरूको शारीरिक हानि र शोकको ख्याल राख्छन्। यो के हो कि मैले राम्रोसँग काम गरें। र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले कुनै व्यक्तिले दुःख पाएमा मलाई पछुताउनु पर्दैन। त्यसोभए जब म यसको लागि दोषी छु (त्यसो भए पनि) म पक्का छु कि म माफी चाहन्छु। दुर्घटनामा हेजी मानिसहरूलाई भाडामा लिनुहोस् जो यसको लागि दोषी छैनन्, र क्षति आफैं दोषी छ, उनीहरूले गरेको क्षतिको लागि कति पीडा छ।
आदेश अवस्थित छ भनेर तपाईंले उद्धृत गर्नुभएका मेरा शब्दहरू मलाई अब याद छैन, तर मैले तालमुडिक तर्क श्रृंखलाको तेस्रो पुस्तकमा यसको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखेको छु। पुस्तकको सम्पूर्ण भाग अनिवार्य र व्यावहारिक शिक्षा बीचको भिन्नतामा समर्पित छ। आज्ञा एक प्रकारको वास्तविकता हो, र व्यावहारिक निर्देशन यसको व्युत्पन्न मात्र हो। एक धेरै हलाखीक तथ्य। तपाईंले भर्खर मलाई त्यो सम्झाउनुभयो।
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 01:XNUMX बजे
तपाईंको शब्दहरूबाट "उद्धरण" त्यहाँ थ्रेडको जवाफमा थियो जब मैले RAKA बाट यो निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरें कि आज्ञा केवल परमेश्वरको वचन होइन (यदि केवल परमेश्वरको वचन हो भने परमेश्वरले वास्तवमा आदेश दिनुभएको अवस्थामा मिट्ज्वासँग सम्बन्धित छैन। गर्न नहुने र गर्न पनि निषेध गर्दछ) र तपाईंले जवाफ दिनुभयो, "म एक विश्लेषणसँग सहमत छु जसले मिट्जोसको धारणामा आधारलाई एक प्रकारको वास्तविकताको रूपमा देख्छ र ईश्वरको वचनको अस्तित्व मात्र होइन।" मैले त्यहाँ तिम्रो मनसाय सहि नबुझेको हुन सक्छ तर मेरो नजरमा RAA को शब्दहरू अझै पनि बुझ्नै नसकिने छन्। यदि तपाईंले मलाई यो विचार बुझ्न मद्दत गर्नुभयो भने म धेरै आभारी हुनेछु।
दु:खको लागि, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ मानिसहरूको बानी बाहिरको गल्ती (परम्परागत बनाम पुस्तकहरूबाट हलाखिक) र वास्तविक आधार बीचको भिन्नता छ, किनभने तिनीहरू केवल आफ्नो खुट्टामा पाइला नपाएकोमा पछुताउँछन् र ट्यासलको लागि पछुताउँदैनन्। र baboon तिनीहरूले सम्झाए पनि। तर म त्यो कुरा गर्छु।
र मुख्य कुरा - यदि नैतिकता अनिवार्यताको कारणले मात्र बाध्यकारी छ भने जहाँ एक नैतिकता विरोधी अनिवार्यता छ त्यहाँ हजारौं क्षति नोक्सान गर्न पनि मानक समस्याको टुक्रा छैन। तपाईंले स्तम्भमा बताइएझैं मानिसहरूले द्वन्द्व महसुस गर्छन् र भगवानको अगाडि पनि घुमाउँछन् भन्ने कुराको जवाफ के छ? तपाईंको जवाफ जहाँसम्म मैले बुझेको छु यो गल्ती हो र वास्तवमा हानि गर्न कुनै मानक समस्या छैन जब भगवानले हानि गर्नबाट जोगिन आफ्नो नैतिक आज्ञा फिर्ता लिनुभएको छ। र भौतिक क्षतिको मर्मत नगर्ने बनाम आध्यात्मिक क्षतिको मर्मत गर्ने सिद्धान्त भनेको मानिसहरूका भावनाहरूलाई व्याख्या गर्नको लागि मात्र हो र तिनीहरूलाई न्यायोचित बनाउन होइन। ए तेसो पो?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 52:XNUMX बजे
यो आध्यात्मिक लाभको बारेमा मेरो सुझावबाट बुझ्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई ल्याउने काम गर्न मसँग कुनै दायित्व नभए पनि यी बाहिर खडा हुन्छन्। तर निस्सन्देह लाभ मात्र एक mitzvah परिभाषित गर्न पर्याप्त छैन। रूपक रूपमा म भन्न चाहन्छु कि आज्ञा पनि सदाको लागि अवस्थित छ। तर कहिलेकाहीँ यो अर्को आज्ञाको कारण पारित गर्नुपर्छ।
उनले गरेको कामको एउटा उदाहरण त्यो समयले महिलाहरूलाई निम्त्यायो। लगभग सबै मध्यस्थकर्ताहरूको सहमति छ कि यो गर्नको लागि मूल्य छ, र तिनीहरूमध्ये धेरैले यसलाई अस्तित्ववादी मिट्वाह (रब्बी ब्रिसको अर्थ सफाराले अस्वीकार गर्छ भनेर लेख्छन्) मान्नुहुन्छ। तर भगवानको आज्ञा अनुसार महिलाहरु मुक्त छन्। यसो गर्नै पर्दैन, त्यसोभए उनीहरुले गरे पनि के मिजाज हुन्छ ?
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ हानिको सामान्य समस्या छ र शोक वास्तविक हो र मनोवैज्ञानिक मात्र होइन। नैतिक नोक्सानहरू आध्यात्मिक नभई परमेश्वरले मेटाउनुहुने छैन यदि तपाईंले आफूलाई चाहिएको काम गर्नुभयो भने पनि।
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 15:XNUMX बजे
आज्ञा सदाको लागि अवस्थित छ तर पार गरिनु पर्छ भन्ने रूपकले समस्याग्रस्तलाई चित्रण गर्दछ। यो सम्भव छ जब आक्रमणको स्रोत कुनामा मौन आध्यात्मिक तथ्यहरूबाट हो र सम्भव देखिदैन जब मिट्ज्वा एक बुद्धिमान प्राणी हो जसले मलाई के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा बताउनुपर्छ। त्यसो गर्दा, तपाईंले शब्बतमा Gd मा शोफरसँग अख्तियारको आज्ञालाई तुलना गर्नुहुन्छ, जहाँ Gd ले मलाई ठुलो ठट्टा गर्न निषेध गर्दछ (मलाई ऋषिहरूको आज्ञा पालन गर्न आदेश दिन्छ। म स्वीकार्छु कि यो विभाजन परिभाषित गर्न गाह्रो छ, तर अन्यथा यो अवस्थित देखिन्छ। प्रतिबन्धको बाबजुद पनि उहाँको महिमापूर्ण आँखाले विद्रोह गरेर शोफर उडाएर मैले ईश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेको छु भन्नु अनौठो कुरा हो । MM यदि त्यसो हो भने उसले यसमा ध्यान दिनेछ (यसरी यो अपराधमा अर्को मिट्ज्वासँग तुलना गर्न रोचक छ र तपाईले आर. आशेर वेइसमा ल्याउनुभएको छलफल, म यसमा पनि ध्यान दिनेछु। र यसमा पोर्कको स्वाद निलिएको छ। दौरिताबाट निषेध गर्ने तरिकामा सायद राकाले पनि खानको आज्ञा छैन भन्ने स्वीकार गरे)
मैले बुझिन कि कुन मानक समस्यालाई हानि पुर्‍याउनु पर्छ यदि प्रश्नको मामलामा यस विशिष्ट हानिलाई हानि गर्न निषेध गर्ने परमेश्वरको कुनै आज्ञा छैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, तपाईले भन्नु भएको छ कि हानि नगर्ने आज्ञाको नैतिकतामा पनि अवस्थित रहन्छ तर यसलाई पार गर्न अनिवार्य छ। यदि कमाण्ड एक बुद्धिमान संस्था हो जसले सबै कुरा जान्दछ र टोलीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ भने यो कुरा मैले माथिको रूपमा बुझेको छैन। मैले भनेझैं म यसमा विचार गर्नेछु, सायद म वर्ग विश्लेषणबाट पीडित छु।
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 41:XNUMX बजे
दौरिता र मित्ज्वाह निषेधको सन्दर्भमा, बलिदानले गरेको शिकारको राम्रो उदाहरण (निषेधमा खाना खानाको रूपमा रहन्छ र मिट्व रहन्छ वा मिट्व पनि हुन्छ र अपराध पनि गर्दछ) छोरीको कष्ट हो। भाइहरूलाई। बेट हिलेलले निषेध गर्छ र बच्चा हरामी। के उनीहरुको विचारमा छोरीको पिडामा शोक गर्नेहरुले पनि शोकको मिजाज पूरा गर्न सक्छन् ?! (मित्ज्वा भित्रका नियमहरू र विभिन्न मिट्जोसमा नियमहरू बीच विभाजन गर्न सम्भव छ। तर सम्पूर्ण कुरा यो हो कि यो मलाई ठ्याक्कै उस्तै देखिन्छ)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 55:XNUMX बजे
त्यहाँ आध्यात्मिक तथ्यहरू छन्, मैले स्तम्भमा लेखेको छु। तर तिनीहरूको कुनै वैधता छैन जबसम्म त्यहाँ कुनै निकाय छैन जसले तिनीहरूलाई कानून बनाउँछ र / वा तिनीहरूलाई आदेश दिन्छ।
निषेध र दायित्वको अभावमा हाम्रो मामलामा कुनै भिन्नता छैन। तपाई आफैं यो स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मुश्किलले यसलाई गाह्रो बनाउनुहोस्। म छक्क परें!
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 01:XNUMX बजे
तपाईलाई के लाग्छ पहिलो उदाहरणमा, रका शब्दहरू कुनै पनि लाउ दौरितामा पनि छन् जुन कुनै कर्मको कारणले खारेज हुँदैन यदि त्यहाँ कर्म हो र उल्लङ्घन भयो भने लाओले मित्ज्वाह जित्यो र कर्तव्यबाट बाहिर गयो, वा उसको शब्दहरू? डरबन प्रतिबन्धमा मात्र दौरिता मित्वाह रद्द हुन्छ?
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 14:XNUMX बजे
पहिले विचार र बुद्धिमानी को आवश्यकता छैन। यो अपराध मा अर्को mitzvah अवैध छ भन्ने तथ्यबाट यसको प्रमाण छ कि मलाई लाग्छ। र पहिले नै पहिलोले यो नियम बीचको भिन्नतामा जोड दियो र एक घृणित नम्बर बनायो। जे भए पनि, धेरै जसो केसहरूमा, जब कानून कुनै कारणले अस्वीकृत हुँदैन (उदाहरणका लागि, यो एक साथ छैन), यो सर्वोच्च अदालतको अवस्था हो।
तपाईको विचारमा, यसका लागि कुनै पदको आवश्यकता छैन, किनकि परिस्थिति आफैंमा यस्तो मित्वाको लागि कुनै मूल्य छैन। तर गेमाराले यो कुरा "आप्रवासी लुट्न घृणा गर्ने व्यक्ति" बाट सिक्छ। यसबाहेक, Thos अनुसार।
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 29:XNUMX बजे
मैले अपराधमा अर्को मिट्ज्वामा माथि टिप्पणी गरें तर मैले लुटेको सुक्काको उदाहरण मात्र सोचें जहाँ मिट्ज्वाको कार्य अपराध होइन (र त्यहाँ आर. आशेर वेइस र इजलका शब्दहरूमा तपाईंको छलफल छ)। अब मैले विकिपिडियामा पेसाचमा डुबेको माटजा खाएको उदाहरण देखेको छु र तिनीहरूले त्यहाँ दाबी गरे (मैले स्रोत जाँच गरेन) कि तिनीहरू मत्जाह प्रदर्शन गर्न आफ्नो बाटोबाट बाहिर जाँदैनन् र मत्जाह मत्जाह पालन गर्दैनन्। र तपाईले भन्नुभएझैं यो प्रमाणित हुन्छ (उनीसँग अरू कुनै मत्जाह नभएको अवस्थामा मात्र हुन सक्छ र त्यसैले यो स्पष्ट छ कि Gd ले उसलाई डुबेको माटजा खान निषेध गरेको छ)।
पद बिना हामीले के बढ्दैछ भनेर थाहा पाउने छैनौं, त्यो हो, भगवानले वास्तवमा के आदेश दिनुहुन्छ, सायद डुबेको मात्जामा उसले अरू कुनै मतजाह नभएको खण्डमा खानको लागि हो आदेश दिन्छ। मलाई त कुरो थाहा छैन तर आप्रवासीमा लुटपाटको अभिब्यक्ति लुटेराले किनेर आएपछि पनि सबै अभिप्राय र उद्देश्यका लागि उसको आप्रवासीलाई भोक खाएर खाने अनुमति दिइए पनि वेदीको लायक छैन । [यसबाहेक, अन्यथा "पदको आवश्यकता छैन" भनेर प्रमाणित गर्ने विचार एकदम संदिग्ध छ र विशेष गरी उल्टो सिकाउने पदको स्तम्भको प्रकाशमा, किनकि हामीसँग यहाँ र त्यहाँ विचारहरू छन् र म पक्कै पनि स्वीकार गर्दछु। कि RAKA ले आफ्नो शब्दहरू भन्नुभयो र तपाईलाई उहाँका शब्दहरू स्वीकार्य छन् जस्तो लाग्छ मलाई यो व्याख्याबाट बाहिर निस्कन एउटा पद चाहिन्छ भन्ने सोचेर समस्या छ]
कुनै पनि अवस्थामा, मान्नुहोस् कि तपाईले भन्नुभए अनुसार यो बाहिर निस्कन्छ कि जसले डुबेको माटजा खान्छ उसले माटजा आज्ञालाई बिल्कुल पालन गर्दैन र डुबाउने निषेधको उल्लङ्घन गरेको छ। तर जसले याकोभको लागि शब्बाटमा संयुक्त राज्यमा शोफर फुकायो उसलाई फुक्ने आज्ञा थियो र शब्बात डर्बन हुँदै गयो।
यसको मतलब यो हो कि टोराह भित्र अस्वीकृतिको नियमहरूमा मिट्ज्वा "स्वयं" लाई केवल परिस्थितिहरूको लागि परिभाषित गरिएको छ जसमा यसलाई अस्वीकार गरिएको छैन। तर डरबनबाट अस्वीकार गर्ने नियमहरूमा मित्वा दौरिता "बाहिर रहन्छ" बाहेक वास्तवमा यसलाई राख्न निषेध गरिएको छ र रूपक जस्तै यो आज्ञा सदाको लागि अवस्थित छ तर कहिलेकाहीँ यसलाई तोड्नुपर्दछ।
10 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
तपाईंको सुझावको लागि कि धार्मिक कानून, वा कम्तिमा यसको अन्तर्निहित मूल्यहरू, ईश्वरमा थोपाएका स्वतन्त्र तथ्यहरूबाट व्युत्पन्न हुन्छन् - मलाई लाग्छ कि ईश्वरलाई बाँध्ने अर्को आयामलाई नविकरण गर्नुको सट्टा, परिणामस्वरूप ईश्वरशास्त्रीय कठिनाइहरू, यो विचारमा राख्न सकिन्छ। मानव प्रशिक्षणको लागि उच्च आवश्यकता। मानिसको प्रशिक्षण र छनोटलाई अधिकतम बनाउनको लागि, नैतिकतासँग द्वन्द्वमा परेकाहरू पनि तिनीहरूका लागि "परमेश्वरसँग धेरै टोरा र मिट्जोस छ"। मलाई याद छ तपाईंले एउटा स्तम्भमा लेख्नुभएको थियो कि यो ठ्याक्कै मानहरूको बहुलता हो जसले छनोटलाई थप अर्थ दिन्छ, किनकि त्यहाँ मानहरू बीच थप सम्भावित संयोजनहरू छन्।
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/16 30:XNUMX बजे
जसलाई म धार्मिक मूल्य भन्छु, तिमीले मानव प्रशिक्षण भन्दछौ। त्यसोभए यो कसरी फरक छ? मानिसको पूर्णता बाहेक वस्तुमा कुनै लक्ष्य नै छैन भन्न खोजेको हो ? यसले पछ्याउँछ कि सबै कानूनहरू पूर्णतया स्वेच्छाचारी छन् (उनले अन्य र विपरीत कानूनहरू पनि छनौट गर्न सक्थे)। तर त्यसपछि टिर्गिट्जको तर्क फर्कन्छ, किन त्यहाँ केसहरू छन् जसमा उनले नैतिकताको विरुद्धमा राखेका छन्।
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/22 07:XNUMX बजे
तपाईं लेख्नुहुन्छ कि Gd मा धार्मिक मूल्यहरू जबरजस्ती गरिन्छ, तर जे होस्, धार्मिक मूल्यहरू बीचको द्वन्द्वको स्थितिमा यसले चमत्कार गर्दछ र विगतमा गरेको धार्मिक क्षतिलाई रोक्छ। यदि मैले उहाँलाई धार्मिक मूल्यहरू कसरी जबरजस्ती गरेको हो भनेर बुझेको छैन - तब उसले चाहेको बेला रद्द गर्न सक्छ। र यदि उसले प्रकृति (धार्मिक प्रकृति पनि) मा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन भने, उसले किन धार्मिक मूल्यहरू बीचको विवादमा हस्तक्षेप गर्छ?
H. Bader B. H. 11 - 03/2022/01 53:XNUMX बजे
त्यसो गर्न उनी बाध्य छैनन् । उसलाई जबरजस्ती यो मूल्य हो। नैतिकतामा पनि उसलाई त्यसो गर्न बाध्य छैन तर राम्रोको परिभाषा यही हो।
19 Adar 03, 2022 - 22/04/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
तपाईले यहाँ लेख्नु भएको कुराको सम्बन्धमा "
"यद्यपि थप विचारमा यो तर्क गर्न सकिन्छ कि सैद्धान्तिक रूपमा यदि मैले केहि गर्न दिए भने आध्यात्मिक क्षति पनि जोगिन सक्छ। यो भन्न सकिन्छ कि Gd ले चमत्कार गर्दछ र क्षतिलाई रोक्छ ताकि म जस्तो धर्मी व्यक्ति जो कानूनप्रति वफादार छ, त्यहाँ कुनै दुर्घटना नहोस्। "
यदि त्यसो हो भने, मानिसहरूले गर्ने सबै आत्मिक क्षतिलाई रोक्नको लागि उहाँले सधैं चमत्कारहरू किन गर्नुहुने छैन, चाहे तिनीहरूले अनुमति दिएका वा नगर्ने?
20 Adar 03, 2022/19/24 XNUMX:XNUMX बजे
किनभने उहाँको चासो छ कि संसारको भाग्य हाम्रो कार्यहरूमा निर्भर हुनेछ। यो सोध्नु जस्तै हो किन हामीलाई एक छनौट दिनुहोस् र हामीलाई सधैं एक विकल्प बिना राम्रो काम नगर्नुहोस् (र वास्तवमा हामीलाई सिर्जना नगर्नुहोस्)।
20 Adar 03, 2022/19/41 XNUMX:XNUMX बजे
संसार साँच्चै हाम्रो कार्यहरूमा निर्भर हुनेछ, केवल आध्यात्मिक क्षति हाम्रो कार्यहरूमा निर्भर गर्दैन, किनकि त्यहाँ तपाईले जे लेख्नु भएको छ त्यसमा हस्तक्षेप हुन्छ। र त्यसभन्दा माथि, यदि ईश्वरले पनि आध्यात्मिक हानि हाम्रो कार्यमा निर्भर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए आध्यात्मिक क्षति रोक्नको लागि कुनै काम गरेको व्यक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न किन अनुमति दिइन्छ? आखिर, यो उनको नीतिको लागि लुगा हो कि संसार हाम्रो कार्यहरूमा निर्भर हुनेछ।
20 Adar 03, 2022/23/28 XNUMX:XNUMX बजे
हाम्रो कार्यमा निर्भर हुनेछ मतलब हामीले अनुमति वा निषेधित कार्य गर्यौं भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
19 Adar 03, 2022 - 22/33/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
तपाईंले यस अनुच्छेदमा के लेख्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा:
"म उसको प्रश्नको व्याख्या गर्नेछु। मेरो विधि अनुसार, ईश्वरले हामीलाई धार्मिक मूल्यहरू प्रवर्द्धन गर्न विरोधी नैतिक उपदेशहरू राख्न आदेश दिनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने, टिर्गिट्जले तर्क गर्छन्, यस्तो देखिन्छ कि धार्मिक मूल्यहरू पनि उनीमाथि बाध्य छन् र उनको मनमानी इच्छा (उनको सार्वभौम कानून) को परिणाम होइन। यदि आज्ञाहरू "हलाखिक तथ्यहरू" परमेश्वरमा थोपाएका थिएनन् तर उहाँको विधानद्वारा सृष्टि गरिएका थिए भने, उहाँले तिनीहरूलाई फरक रूपमा लागू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा म आशा गर्छु कि यदि उसले राम्रो गर्न चाहन्छ भने (र विरासतमा) उसले नैतिकता विरोधी कानूनहरू बनाउने छैन। द्वन्द्वको अस्तित्वले हलखाह (वा धार्मिक मूल्यमान्यताहरू, जसलाई हलाखाहको समान कानूनले बढावा दिन्छ) लाई पनि परमेश्वरमा जबरजस्ती गरिएको हो, र त्यसैले उहाँलाई यी द्वन्द्वहरूको आवश्यकताबाट बाहिर (वा हामीलाई धम्की) पक्रिएको छ।
तपाईको भनाइबाट हलाचाका सबै मित्भो र कानूनहरू Gd मा बाध्य छन्, तर तपाईको तर्कबाट यो नैतिकता विपरित कानून र मित्भोहरूको सन्दर्भमा मात्र अनुमान गर्न सकिन्छ। शेमा पढ्ने जस्तो आज्ञा नैतिकताको विरुद्धमा खडा हुँदैन र त्यसैले यो आवश्यक छैन कि यो Gd मा जबरजस्ती गरिएको हो वा यो हलाखिक तथ्य हो।
यसबाहेक, यो सम्भव छ कि परमेश्वरले कुनै कुराको आदेश दिनुहुन्छ जुन अनैतिक देखिन्छ, यो ठूलो नैतिक अन्याय रोक्न हो। उदाहरणका लागि, पीडितहरूको कुरा। स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले जनावरहरूलाई अनावश्यक रूपमा मार्ने आदेश दिनुहुन्छ। तर यो सम्भव छ कि यो आज्ञा बिना, मानिसहरूले धर्मलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्ने थिए किनभने यसले टोरा दिन अघिको धार्मिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भाग समावेश गरेको थिएन। अर्थात्, यहूदी धर्ममा संक्रमण धेरै तीव्र थियो र यसले यो संक्रमण हुनबाट जोखीममा परेको थियो।
थप रूपमा, यो सम्भव छ कि भगवानले कहिलेकाहीं उहाँको इच्छालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ (जुन उहाँलाई बाध्य पारिएको छैन) उहाँका प्राणीहरूलाई नैतिक हानि भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा। उदाहरणको लागि, इनाम पाउने परमेश्वरको इच्छालाई लिऔं। यदि यस उद्देश्यका लागि उसले कहिलेकाहीं आफ्ना प्राणीहरूबाट कसैलाई हानि पुर्‍याउँछ भने, ऊ त्यो इच्छालाई बढावा दिनको लागि त्यसो गर्न तयार हुन सक्छ, र उसले कुनै समयमा त्यो इच्छा त्याग्न सक्ने भए पनि उसले यसलाई नैतिक हानि भन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा प्राथमिकता दिन्छ। । त्यो हो, यो सम्भव छ कि नैतिकताको विपरीत हुने आदेशहरू पनि उहाँमाथि जबरजस्ती गरिएको छैन र हलाखिक तथ्यहरू होइनन्, र तैपनि उहाँले तिनीहरूलाई आदेश दिन छनौट गर्नुहुन्छ किनभने यो नैतिक हानि भन्दा उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। र यदि तपाइँ भन्नुहुन्छ कि यो एक अनैतिक छनोट हो र भगवान सधैं नैतिक हुनुहुन्छ भन्ने धारणाको विपरीत हो, म जवाफ दिनेछु कि भगवान पनि आफैंप्रति नैतिक हुनुपर्छ। त्यो हो, जब उसले आफ्नो इच्छा त्याग्छ, त्यहाँ आफैलाई चोट लागेको छ (तपाईंको पूर्ववर्ती जीवनको एक प्रकारको विचार)।
20 Adar 03, 2022/19/27 XNUMX:XNUMX बजे
वास्तवमा, तर्कले नैतिक विरोधी कानुनसँग मात्र सम्बन्धित छ।
पीडितहरूको लागि, मैले प्रश्न बुझिन। तपाईंले बलिदानका आज्ञाहरूको पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। ल। र यदि तपाइँको मतलब यो एक अप्रत्यक्ष नैतिक व्याख्या हो भने, मेरो विचारमा यो सम्भव छैन।
जब तपाईले भन्नुहुन्छ कि उसको नजरमा केहि राम्रो छ, यसको मतलब उसको केहि वस्तुगत लक्ष्य छ जुन केवल परमेश्वरको मनमानी इच्छाको परिणाम होइन।
20 Adar 03, 2022/19/47 XNUMX:XNUMX बजे
बलिदानहरूको लागि, मेरो मतलब त्यहाँ आज्ञाहरू छन् जुन हामीलाई नैतिक विरोधी देखिन्छ, तर वास्तवमा तिनीहरूको गहिराइमा तिनीहरू नैतिकतालाई बढावा दिन्छन्। हामी कसरी वा किन बुझ्दैनौं तर तिनीहरूको पछाडि गहिरो व्याख्या हुन सक्छ जसले नैतिकताको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउँछ (सबै विरोधी नैतिक आज्ञाहरू आवश्यक हुँदैनन्, तर कम्तिमा ती मध्ये केही हुन सक्छन्)।
उहाँको नजरमा प्राथमिकताको लागि, मेरो मतलब परमेश्वरको "व्यक्तिगत" इच्छा र इच्छाहरू हो। त्यो हो, उसलाई बाहिरबाट बाध्य पारिएको कुरा होइन, तर उसको भित्री इच्छा। परमेश्वरको इच्छाको सन्दर्भमा स्वेच्छाचारी शब्द यहाँ उपयुक्त छ भन्ने कुरामा म पक्का छैन। जसरी कसैको प्रमाणित चेस खेलाडी बन्ने चाहनालाई स्वेच्छाचारी इच्छा भनिदैन (न त यो बाहिरबाट उसलाई जबरजस्ती गरिन्छ)। यो व्यक्तिगत इच्छा हो। हुनसक्छ भगवान एक निश्चित क्षेत्रमा "प्रमाणित चेस खेलाडी" हुन चाहनुहुन्छ, र त्यसको लागि उहाँ कहिलेकाहीँ केही मानिसहरूलाई नैतिक हानि त्याग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
20 Adar 03, 2022/23/31 XNUMX:XNUMX बजे
मलाई भगवानको व्यक्तित्व र इच्छाहरू छलफल गर्न गाह्रो छ।
21 Adar 03, 2022/00/19 XNUMX:XNUMX बजे
म आफैं धम्की दिने व्यक्तित्वहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। म भन्छु कि त्यहाँ Gd को केहि इच्छा हुन सक्छ, कि यद्यपि यो उहाँलाई बिना (हलाखिक तथ्य) बाट जबरजस्ती गरिएको छैन, यो अझै पनि उहाँका प्राणीहरूलाई नैतिक चोट भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ, र त्यसैले उहाँले यसलाई आदेश दिनुहुन्छ।
21 Adar 03, 2022/07/03 XNUMX:XNUMX बजे
यदि यो उहाँमाथि जबरजस्ती गरिएको छैन र यसलाई हुकुम गर्ने उद्देश्य केही छैन भने, यो उसको मनमानी निर्णय हो, र डचीलाई ड्रा कुश्य। या त यो स्वेच्छाचारी हो वा यो जबरजस्ती हो (यस अर्थमा कि नैतिक मूल्यहरू हामीमाथि बाध्य छन्। तिनीहरूको वैधता जबरजस्ती छ, तिनीहरू अनुसारको आचरण होइन)। म तेस्रो सम्भावना देख्दिन।
21 Adar 03, 2022/11/28 XNUMX:XNUMX बजे
के एक प्रमाणित चेस खेलाडी बन्न चाहने व्यक्ति उसको मनमानी इच्छा हो? वा उसलाई जबरजस्ती गरिएको हो?
21 Adar 03, 2022/12/39 XNUMX:XNUMX बजे
केवल मनमानी इच्छा। यदि यो जन्मजात छ भने, यो उसलाई जबरजस्ती छ।
21 Adar 03, 2022/14/56 XNUMX:XNUMX बजे
त्यहाँ कामको रहस्यको उच्च आवश्यकता र तिर्ने ईश्वरको इच्छाको कुरा छ। दुबैमा, यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ। यो सम्भव छ कि यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कसैलाई नैतिक हानि पुर्‍याउनबाट मुक्ति छैन। जसरी मानिसहरूले चिकित्सा उद्देश्यका लागि पशु प्रयोगहरू गर्छन्, यो सम्भव छ कि कहिलेकाहीं यसले हामीलाई हानि पुर्‍याउँछ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ।
21 Adar 03, 2022/14/59 XNUMX:XNUMX बजे
AHN त्यसैले उनलाई बाध्य पारिएको छ । पुरस्कृत हुनु भनेको थप सिद्ध हुनु हो, र पूर्णताको परिभाषा उसको हातमा छैन।
21 Adar 03, 2022/15/41 XNUMX:XNUMX बजे
यो अनिवार्य रूपमा उहाँमाथि किन बाध्य हुनेछ। उसले रोज्न सक्छ। आखिर, यो उसलाई बाध्य पारिएको छ भन्न को लागी सबै आवश्यकता भगवानले केहि अनैतिक छनौट गर्नुहुन्न भन्ने व्याख्याबाट आउँछ। तर मैले एउटा उदाहरण दिएको छु कि जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ मानिसले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि अनैतिक कुरा छान्छ र ठीकै हो (पशु चिकित्सा प्रयोगहरू)
21 Adar 03, 2022 - 17/02/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
मानिसले यो जबरजस्ती गर्छ। रोग उनीहरूलाई बाध्य पारिएको छ र निको पार्ने तरिका पनि।
21 Adar 03, 2022 - 17/46/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
तिनीहरूले मानिसमा प्रयोग गर्न वा औषधि छोड्न सक्छन्। अर्थात्, त्यहाँ कुनै मूल्य आवश्यकता छैन न त कुनै मूल्य तथ्य जसले जनावरमा प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ।
21 Adar 03, 2022 - 18/51/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
त्यहाँ एक तथ्य छ कि एक प्रयोग सिक्नको लागि आवश्यक छ, र त्यहाँ एक नैतिक तथ्य छ कि शब्बत मानव जाति भन्दा उच्च छ।
21 Adar 03, 2022 - 19/43/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
त्यसोभए किन Gd मा जबरजस्ती हलाखीक तथ्यहरूमा आउनु पर्छ। यो भन्न सकिन्छ कि त्यहाँ एक नैतिक तथ्य छ जसले भन्छ कि ईश्वरको आवश्यकता र मानव जातिलाई नैतिक हानि बीचको द्वन्द्वको सट्टा, त्यहाँ एक नैतिक तथ्य छ जसले भन्छ कि परमेश्वरको आवश्यकतालाई सम्झौता गर्नु भन्दा मानव जातिलाई हानि गर्नु राम्रो हो।
21 Adar 03, 2022 - 19/48/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
परमेश्वरको आवश्यकता पनि उसलाई बाध्य पारिएको छ, वा यो आवश्यक छैन र नैतिक मूल्यहरूको अस्वीकारलाई औचित्य दिँदैन।
मेरो विचारमा यसबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय छैन: या त जबरजस्ती वा स्वेच्छाचारी। अनि स्वेच्छाचारीले नैतिकतालाई अस्वीकार गर्दैन। प्रत्येक पटक तपाईं फरक दिशाबाट आउनुहुन्छ तर जवाफ एउटै छ। कम्बल छोटो छ, तपाईं आफ्नो खुट्टा वा टाउको छोप्न सक्नुहुन्छ तर दुवै छैन।
21 Adar 03, 2022 - 20/13/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
ठीक छ, तर आवश्यकता हलाखिक तथ्य होइन। मैले तपाईबाट बुझेको कुराबाट हलाखिक वा नैतिक तथ्यहरू आवश्यकको क्षेत्रका तथ्यहरू हुन् र होइन।
21 Adar 03, 2022 - 20/54/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
यसले केही फरक पार्दैन। अझै पनि उनीमाथि बाध्यताका कुराहरू छन्। तर त्यो भन्दा पर, यो आवश्यकता एक तथ्य हो जसले OUGHT सिर्जना गर्दछ। नैतिक मूल्यमान्यता जस्तै कानुन बाध्य पारिएको तर्क छ । तथ्य र आवश्यकताको आधारमा जबरजस्ती होस् वा प्रत्यक्ष रूपमा यो मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। मलाई अझै लाग्छ कि यी मानहरू हुन्, तर किन यो महत्त्वपूर्ण छ?!
21 Adar 03, 2022 - 21/07/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
यो मैले पहिलेको प्रतिक्रियामा तर्क गरेको हो। कि यस आवश्यकताको तथ्यले सिर्जना गर्दछ, तर यो नैतिकताको दायराबाट हुनुपर्छ र हलाखिक वा अन्यथाको दायराबाट होइन। जसरी मानिसमा होइन जनावरमाथिको प्रयोग नैतिक रूपमा गर्नुपर्छ र म गएको छैन ।
21 Adar 03, 2022 - 21/12/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
नैतिकता आवश्यक छैन। केहि आवश्यकता वा मूल्य, नैतिक वा छैन। उदाहरणका लागि, परम्परागत अर्थमा परमेश्वरको प्रशिक्षण नैतिक आवश्यकता होइन। सुँगुरको मासु खान प्रतिबन्ध पनि नैतिक तथ्यको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्दैन।
21 Adar 03, 2022 - 21/19/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
मेरो मतलब यो थियो कि परमेश्वरले उहाँमा अवस्थित केही आवश्यकताहरूबाट नैतिक विरोधी आज्ञाहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ। तर आदेश दिनुअघि नै आफ्नो आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने कि मानवजातिलाई नैतिक हानिबाट बच्ने भन्ने अन्योलमा छन्। यो दुविधा नैतिक क्षेत्रमा निहित छ। जसरी मानव वा जनावरमा प्रयोग गर्ने दुविधा नैतिक क्षेत्रमा छ।
21 Adar 03, 2022 - 21/32/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
त्यसोभए त्यहाँ एक धार्मिक मूल्य छ (जसलाई तपाईले आवश्यकता कल गर्न रोज्नुहुन्छ) जुन यसलाई बाध्य पारिएको छ, र यो र नैतिकता बीचको दुविधामा मात्र निर्णय नै नैतिक निर्णय हो। मानौं तपाई सहि हुनुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? तर्क कहाँ छ? त्यसबाहेक, मेरो विचारमा धार्मिक मूल्य वा आवश्यकता र नैतिक मूल्य बीचको निर्णय आफैमा नैतिक स्तरमा छैन।
बेन हा हा
22 Adar 03, 2022 - 10/57/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
मेरो जानकारी अनुसार, रब्बी मिचीले यो दाबी गर्छन्:
ए। परमेश्वरले राम्रो चाहनु हुन्छ किनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ
बि. एक धार्मिक आदेश नैतिक आदेश जस्तै होइन
तेस्रो। धार्मिक व्यवस्था र नैतिक व्यवस्था बीचको द्वन्द्वमा, नैतिक व्यवस्था कहिलेकाहीं रोज्नु पर्छ
द्वन्द्व काल्पनिक मात्र हो भनेर दाबी किन नगर्ने (रब्बी लिक्टेनस्टाइनको दृष्टिकोण र धार्मिक जिल्लाहरूमा प्रचलित मनोवृत्तिको पक्षमा)?
D. यो मेरो बुझाइ छ कि यो अनिवार्य रूपमा पालन गर्दछ कि धार्मिक आदेश भगवान मा पनि बाध्य छ, अन्यथा उहाँले नैतिकता विपरीत आदेश किन गर्नुहुन्छ?
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने द्वन्द्वको अवस्थामा हामीले नैतिक व्यवस्था किन रोज्ने अनुमति दिइन्छ, किनकि त्यो द्वन्द्वमा परमेश्वरले धार्मिक व्यवस्था रोज्नुभयो?
एक सम्भावित समाधान यो हो कि धार्मिक आदेश ईश्वर द्वारा दिइएको थियो, तर पछि देखि आफ्नो गार्ड मा स्थिर छ, र हामी मान्छौं कि दिइएको वास्तविकता मा उहाँ एक mitzvah थिएन, र त्यसैले नैतिक आदेश को लागी रोज्नुहोस्।
यो सबै हाम्रो छोरा, रामद श्लिताको प्रतिभाको विधि अनुसार, परमेश्वरको इच्छा (र स्वतन्त्रताको विज्ञान हेर्नुहोस्) को छनोटहरू पहिचान नगर्ने आफ्नो विधिप्रति वफादार छ। र कागजात र आईएल।
22 Adar 03, 2022 - 14/06/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
यदि तपाईंले आफ्नो शक्तिको प्रतिभाको शब्दहरू पढ्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि मैले लेखेको छु कि हामीलाई अनुमति छैन, ठ्याक्कै किनभने उहाँले आफैंले पहिले नै छनौट गर्नुभएको छ। त्यसैले समाधान खोजिराख्नु पर्दैन ।
Adar 23, 03 - 2022/14/16 मा XNUMX:XNUMX बजे
यसको मतलब हलाखा र नैतिकता बीच कुनै पहिचान छैन। यी दुई कोटिहरू हुन् जुन सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र छन् (यद्यपि तिनीहरू बीच सधैं विरोधाभास हुँदैन)। कुनै कार्य नैतिक हो वा होइन भन्ने कुराको न्याय गर्नु, र यो अनुमति वा निषेधित हो वा हलाखती रूपमा निर्णय गर्नु दुई फरक र लगभग स्वतन्त्र निर्णयहरू हुन्। हलाखिक र नैतिक श्रेणी दुई फरक वर्गहरू हुन्। अवश्य पनि जहाँ नैतिक र हलाखिक शिक्षाको बीचमा द्वन्द्व छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ (र यो सधैं हलाखिकको पक्षमा हुँदैन), तर द्वन्द्वको अस्तित्व आफैमा समस्याग्रस्त हुँदैन। त्यहाँ दुई नैतिक मूल्यहरू बीच पनि यस्ता द्वन्द्वहरू छन् (जस्तै पीडा दिएर जीवन बचाउने उदाहरणमा), र त्यहाँ हलाखिक मूल्य र नैतिक मूल्य पनि हुनेछ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
स्तम्भ 15 बाट उद्धरण। र लन्डन संग एक अन्तर्वार्ता मा समलैंगिक मा आफ्नो टिप्पणी। के शिक्षकहरू कहिलेकाहीं धार्मिक व्यवस्था पालन गर्दैनन्? के तपाईं मलाई फरक व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?
Adar 23, 03 - 2022/14/43 मा XNUMX:XNUMX बजे
मैले त्रयीको तेस्रो पुस्तकको सुरुमा यससँग व्यवहार गरें। छोटकरीमा, जब त्यहाँ पर्याप्त द्वन्द्व हुन्छ कानून सधैं हावी हुन्छ। उदाहरणका लागि, अमालेकीबाट। टोराले नैतिक मूल्यलाई ध्यानमा राख्यो र अझै पनि यसलाई आदेश दियो। तर जब द्वन्द्व आकस्मिक हुन्छ, जस्तै दिमाग नियन्त्रण र शब्बत, त्यहाँ शब्बातको आदेशबाट बाहिर गर्न असम्भव छ कि यसले पिकुनलाई अस्वीकार गर्दछ वा यसको विपरीत। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो लागि निर्णय लिनुपर्छ।
र यो सबै जब आज्ञा टोरामा स्पष्ट छ। यदि यो व्याख्या वा उपदेशको परिणाम हो भने, यो नियम गलत छ भन्ने शंका यहाँ प्रवेश गर्दछ।
Adar 23, 03 - 2022/14/27 मा XNUMX:XNUMX बजे
यहूदी धर्ममा विपरित प्रवृत्तिको बारेमा छलफलमा मैले उल्लेख गरेको थिएँ, तपाईको विचारमा टोरामा ओकिमाटा गर्ने रब्बी रिस्किन र नैतिकतामा ओकिमाता गर्ने परम्परागत रब्बीहरूको विपरीत, टोरामा नैतिकता रोज्नुपर्छ भन्ने हो। र इजरायल टोराको चलन।
बस, म तपाईलाई मेरो विचार स्पष्ट गर्न को लागी साँच्चै खुशी छु। नैतिकतासँग बाझिएको स्पष्ट दौरिते हलाखाको हकमा, नैतिकता रोज्ने ठाउँ छ? र हलचा डरबनको बारेमा के हो? के ओकिमातालाई दौरिता हलखाह बनाइएको हो कि नैतिकताको विरोध गर्दैन, हलाखिक परम्पराको विपरीत पनि?
Adar 23, 03 - 2022/14/44 मा XNUMX:XNUMX बजे
मैले प्रष्ट पारें । ओकल्टिज्म को लागी यो अवश्य पनि सम्भव छ। व्याख्याको ढोकामा ताला लगाइएको थिएन।
27 Adar 03, 2022 - 14/54/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
एक निर्दोष प्रश्न। एक वैध नैतिकता छ भन्ने तथ्य (उदाहरणका लागि ईश्वरीय) - यो नैतिकता कहाँ दर्ता छ? हत्या र चोरीलाई अनुमति दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अन्तर्ज्ञानबाट के हामी अनुमान गर्छौं? अर्थात्, यदि यो मानव अन्तर्ज्ञान वा परम्परागत सामाजिक मान्यताहरूबाट सिकेको कुरा हो भने, त्यसोभए त्यो अन्तर्ज्ञान स्वीकार नगर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती गर्नु पर्ने छैन। र यदि यो कुनै प्रकारले टोराहसँग सम्बन्धित छ भने, यो फेरि एक लिखित ईश्वरीय कानून हो, र टोरा र नैतिकता बीचको भिन्नता कहाँ छ?
27 Adar 03, 2022 - 15/30/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
यो हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखिएको छ। टोराले हामीलाई सिकाउँछ र तपाईंले सही र राम्रो गर्नुभयो, तर हामीलाई के भन्न खोजेको हो भनेर निर्दिष्ट गर्दैन। उनी मान्छन् कि सबैले नैतिक व्यवस्थाको अर्थ के हो भनेर बुझ्दछन् (यो उनको हृदयको ट्याब्लेटमा लेखिएको छ)। नैतिकताको सामग्री नैतिक अन्तर्ज्ञानबाट सिकिन्छ, तर यसलाई पालन गर्ने कर्तव्य ईश्वरीय इच्छाको आधारमा हो। मैले स्तम्भमा व्याख्या गरे जस्तै। यदि त्यहाँ एक व्यक्ति हो जसमा यो अन्तर्ज्ञान छैन भने यो एक बिरामी व्यक्ति हो र यसको साथ केहि गर्न को लागी छैन। जसरी नदेखेको दृष्टिविहीनलाई केही हुँदैन ।
हलाखाह र नैतिकता बीचको भिन्नता आज्ञामा छ। टोराका आज्ञाहरू हलचासँग मात्र व्यवहार गर्छन्, र नैतिकता आज्ञाको अधीनमा छैन। यो कुनै आज्ञा बिना ईश्वरीय इच्छा हो र त्यसैले यो कानून बाहिर रहन्छ। त्यसकारण पनि यसको सामग्री टोरामा देखा पर्दैन तर हामी भित्र देखिन्छ। अर्कोतर्फ, हलचामा सामग्रीहरू टोरामा पनि लेखिएका छन्। तसर्थ, "र तपाईंले जे सही र राम्रो थियो त्यही गर्नुभयो" लाई कुनै पनि जनसमूहमा मिट्जोसको संख्यामा समावेश गरिएको थिएन।
27 Adar 03, 2022 - 15/37/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
अर्थात्, त्यहाँ एक धारणा छ कि "इमान्दारिता र भलाइ" प्रत्येक मानवले आफ्नो आधारभूत अन्तर्ज्ञानमा बुझेको कुरा हो, त्यो हो, जुन कुरालाई हामीले हत्या र बलात्कारको रूपमा स्वीकार गर्छौं, तर तपाईले नास्तिकहरूलाई पनि सोही प्रश्न गर्नुभयो - तपाई के भन्नुहुन्छ? एक भाडा जो आफ्नो काम नैतिकता हत्या हो भन्ने सोच्दछ। मानिसको लागि बाह्य नैतिक प्रणाली छ भन्ने प्रमाण, ईश्वरीय, तर फेरि, यस प्रणालीले यसको "धार्मिकता र भलाइ" मा के समावेश छ भनेर व्याख्या गर्दैन र फेरि हामी तपाईंलाई सोध्नेछौं कि तपाईं हत्या हो भनेर विश्वास गर्ने भाडाको बारेमा के भन्नुहुन्छ। धार्मिकता र भलाइ। छोटकरीमा, म नैतिकतालाई ईश्वर चाहिन्छ भन्ने धारणाको साथ तपाईले समाधान गरिरहनुभएको समस्यालाई सुधार गर्न चाहन्छु।
27 Adar 03, 2022 - 16/19/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
तपाईं विमानहरू मिलाउनुहोस्। हत्या निषेध हो भनेर नबुझ्ने व्यक्तिको बारेमा होइन तर यो निषेधित छ भनेर बुझेको तर त्यसप्रति प्रतिबद्धता महसुस नगर्ने व्यक्तिको बारेमा मैले प्रश्न सोधेँ। यो एकदम फरक प्रश्न हो। नबुझ्ने मानिस अन्धो हुन्छ। मैले उसलाई के भन्नु पर्छ? जसको अर्थ वास्तविकता नदेख्ने र उदाहरणका लागि रंगहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने अन्धाहरूको लागि हो।
मैले उनीहरूलाई नैतिकताको लागि वैधताको स्रोत के हो र नैतिकताको कानूनले के भन्छ भन्ने होइन भनेर सोधें।
ईश्वर नभएको भए म पनि नैतिकताका नियमहरूको वैधता महसुस गरेको भए, तिनीहरूले बाँध्ने थिएन। म यो भावनालाई भ्रमको रूपमा खारेज गर्नेछु जुन ममा बुझिएको छ कि यसको कुनै वास्तविक वैधता छैन। केवल भगवानले यसलाई वैधता दिन सक्नुहुन्छ।
27 Adar 03, 2022 - 16/25/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
मैले बुझें। तपाई मूलत: नैतिकतामा के समावेश छ भनिरहनुभएको छ - यो हरेक मानवलाई थाहा छ, हत्या र बलात्कार अनैतिक हो भन्ने कुरा हामी भित्र निहित छ। र तपाईं मूलतः तर्क गर्दै हुनुहुन्छ कि यो नैतिकता यसको मूलमा सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्दछ, संस्कृति र समयावधिको परिवर्तनको बावजुद। नास्तिक र आस्तिक बीचको भिन्नता यो हो कि विश्वासीले यो नैतिकताले उसलाई किन बाध्य बनाउँछ भनेर पनि बताउँछ। मैले सहि बुझेको हो ?
27 Adar 03, 2022 - 16/26/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
ठ्याक्कै त्यस्तै। मलाई लाग्छ कि मैले यो स्तम्भ र मौलिक छलफलमा व्याख्या गरेको छु।
27 Adar 03, 2022 - 16/33/XNUMX XNUMX:XNUMX बजे
एक टिप्पणी छोड्नुहोस्	रद्द गर्नुहोस्
लेक्चर अर्डर गर्न, तपाईंले फोन वा व्हाट्सएप मार्फत Dafna Avraham लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
अघिल्लो पाठ्यक्रमहरूको रेकर्डिङहरूको सङ्कलन (आलोचनात्मक सोच, येशिवा छात्रवृत्ति, दार्शनिक सोच, समकालीन र कुलीन र सिंथेटिक यहूदी धर्म) Daphne बाट ०५२-३३२२४४४ मा किन्न सकिन्छ, साथै NIS 052 प्रति पाठ्यक्रममा।
पेपरब्याक त्रयीको नयाँ संस्करण अब जारी गरिएको छ, जसमा धेरै सुधारहरू समावेश छन्, तर यी मुख्यतया प्रिन्ट सुधारहरू हुन् र यसमा कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू छैनन्। साथै नयाँ पुस्तकको ढुवानी पनि आयो ।
पुस्तकहरू एकल पुस्तकको लागि 180 NIS वा 70 NIS को लागि पूर्ण त्रयीको रूपमा बेचिन्छन्। तिनीहरू या त लोदमा वा यरूशलेममा वा 42 NIS को लागतमा घरमा कुरियरको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, पहिलो संस्करणबाट "नो म्यान रुलिंग इन द स्पिरिट" अन्य धेरै पुस्तकहरू छन्। छुटमा किन्न सकिन्छ (30 NIS)। दुई थप नयाँ 150 NIS संग एक त्रयी सेट।
सोधपुछ र खरीद को लागी: Daphne 052-3322444
नयाँ: त्रयी पुस्तकहरूको डिजिटल प्रतिलिपिहरू: पहिलो भेटियो
कुनै पनि मानिस आत्मामा शासक हुँदैन
उभिएको बीचमा हिंड्छ
Zoom मा प्रत्यक्ष पाठ
Zoom मा लाइभ कक्षाहरू निम्न समयमा आयोजित हुन्छन्:
शुक्रबार, प्रत्येक दुई हप्तामा एक पटक, 9: 00-10: 00
पाठ पछि सहभागीहरूले आफूले चाहेअनुसार छलफल गर्न चाहेका प्रश्नहरूको खुला छलफल हुनेछ (पाठसँग सम्बन्धित नभएका पनि)। सबै पाठहरू रेकर्ड र अपलोड पनि छन् पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं तलको लिङ्कमा जूम पाठ कक्षा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:
कक्षाहरू र तिनीहरूको मिति बारे अद्यावधिकहरू सहित व्हाट्सएप समूहमा सामेल हुन, इमेल पठाउनुहोस्: orenmarg@gmail.com
"परमेश्वरको डरको सबैभन्दा ठूलो हानि जब यो टोराहको ज्योतिसँग राम्रोसँग जोडिएको छैन भने यो पापको डरको सट्टा विचारको डरले प्रतिस्थापित हुन्छ, र जब मानिस सोच्न डराउन थाल्छ, उसले मनमा डुब्न थाल्छ। अज्ञानताको माटो, जसले उसको आत्माको उज्यालो लिन्छ। , र उसको आत्मालाई गाढा बनाउँछ" (रब्बी कुक, एइट फाइल्स, ए रज्ज)
"र त्यसकारण उसको विचार, सोधपुछ र ज्ञानको प्रेमको विरोध गर्ने कुनै पनि कुरालाई टाढा राख्नु उचित छैन।" बरु, यस्तो कुरा भनिएको छ: जति मन लाग्छ बोल्नुहोस्… किनकि धर्ममा प्रतिद्वन्द्वीका शब्दहरू लोप हुन्छन्, यो (तर) धर्मको शून्यता र कमजोरीमा मात्र हुँदैन… किनभने मनको आवश्यकता हुन्छ कि कुनै रोकावट हुँदैन। सबै कुरामा… र यसद्वारा मानिस चीजहरूको सत्यको सामग्रीमा आउँछ र पूर्ण सत्यमा खडा हुन्छ, र यस्ता चीजहरूको लागि कुनै संगरोध छैन। आफ्नो वीरता देखाउन कसैको विरोध गर्न खोज्ने हरेक नायकलाई आफ्नो विरुद्धमा आउनेले जति सक्दो जित हासिल गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ र त्यसपछि उसले आफ्नो विरुद्धमा आउन आउने नायकलाई जित्यो भने यस्तो लाग्छ । विजेता सबैभन्दा वीर हो।" (बियर हागोला, बियर शिव, प्रागबाट महारल)।
सहुलियतमा पुस्तकहरू खरिद गर्नका लागि
पाठकहरूको लागि स्पष्टीकरण र धारणाहरू
साइटको फेसबुक पेज
ईमेल द्वारा नयाँ पोस्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्
थप 3,092 सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस्
सबै पोष्टहरूको सूचीको लागि
तिनीहरू कहाँ छन्
ओस्लो सम्झौताको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ?
सानो सिट VS हाई स्कूल सिट
आत्महत्या गर्ने ? कम्तिमा Thos अनुसार।
प्रतिक्रियाहरू पछ्याउन चाहनेहरूका लागि थप सुविधाजनक रूपमा उपकरणहरू तल टिप्पणी टर्चको लागि साइन अप गर्न सल्लाह दिइन्छ।
यसमा थप नगर्नुहोस् र घटाउनुहोस् मा निदा अभियानको जवाफ
समापन मा स्वर्गीय प्रो. डेभिड हलवानी वेइस को मृत्यु संग (स्तम्भ 485)
उनको जनावर मा स्वर्गीय प्रो. डेभिड हलवानी वेइस को मृत्यु संग (स्तम्भ 485)
जोनाथन शालोम नाचियोनमा मा स्वर्गीय प्रो. डेभिड हलवानी वेइस को मृत्यु संग (स्तम्भ 485)
यिशाई मा अध्ययन बारे प्रश्नको जवाफ
भर्खरका टिप्पणीहरूको विस्तारित सूचीको लागि
साइट पाठकहरूको व्हाट्सएप समूह
पोष्ट अपडेटहरूको लागि टेलिग्राम च्यानल
זכויות יוצרים 2022 २०२० रब्बी माइकल अब्राहम | द्वारा संचालित एस्ट्रा वर्डप्रेस थिम